ဟေဂျားဘ် - ဝီကီပီးဒီးယား
များစွာသော မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ဆံပင်များနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖုံးအုပ်ကြသည်။
၁၉ရာစုနှစ်အတွင်း အီဂျီစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဟေဂျားဘ်ဆောင်းထားပုံ ပန်းချီ
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟောင်း မဂါဝါတီ စူကာရ်နဝီပူတရီ ဟေဂျားဆောင်းထားပုံ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမစ်ကစ်မြို့နေ သက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး၏ ဟေဂျားဘ်
အီရန်နိုင်ငံ ပါးရှန်းအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဟေဂျားဘ်ဆောင်းထားပုံ
ဟေဂျားဘ်အား ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် အီဂျဘ်နှင့်အီရန်တွင် ထိုပုံအား မြောက်များစွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အစ္စလာမစ်ဟေဂျားဘ် (အင်္ဂလိပ်: Hijab; /hɪˈdʒɑːb, hɪˈdʒæb, ˈhɪdʒ.æb, hɛˈdʒɑːb/; အာရပ်: حجاب ḥijāb, အသံထွက် [ħɪˈdʒaːb] သို့ တမ်းပလိတ်:IPA-arz) ဆိုသည်မှာ မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မိမိတို့၏ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ခြင်းကို ခေါ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် အစ္စလာမ့်ဓမ္မသတ်အရ အထူးသဖြင့် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးများ မိမိတို့ဆံပင်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို သူစိမ်းအမျိုးသားတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောအနေဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရန် တာဝန်ရှိပေသည်။ ဟေဂျားဘ်သည် တရားတော်၏ အဆုံးအမနှင့် ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သလို လူ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ရလေစေရန် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးမှ သတ်မှတ်ထားသော အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပေသည်။ ဓမ္မသတ်မှူးများ၏ အမြင်တွင် ဟေဂျားဘ် သည် အစ္စလာမ့်ဥပဒေသများအတွင်းမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစေခံမဟုတ်သောမွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတိုင်း မိမိတို့၏မျက်နှာနှင့် လက်ဖဝါးမှလက်ချောင်းထိပ်လေးများအထိမှလွဲ၍ ကျန်နေရာအားလုံးကို သူစိမ်းယောက်ျားသားတို့၏ရှေ့မှောက်တွင် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအား ဟေဂျားဘ်ဟုခေါ်ပေသည်။ ၎င်းအပြင် အမျိုးသားတို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်း မိမိတို့၏ အရှက်အင်္ဂါနှစ်ခုဖြစ်သော ရှေ့နှင့်နောက်ကို ဖုံးအုပ်ရန် ပြငှားန်ထားလေသည်။ တူနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်၌ ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထိုဥပဒေကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ တူရကီတွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်နိုင်ငံသည် မွစ်လင်(မ)အများစု နေထိုင်ရာနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ယင်းနှစ်နိုင်ငံတွင်သာ အစိုးရဌာနများ၊ ကျောင်းများနှင့် အစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့ကြလေသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌တက္ကသိုလ်များတွင် နေကားဘ်ဝတ်ခြင်း (မျက်နှာကိုပါဖုံးအုပ်ခြင်း) ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လူတို့ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်းပင် မိုရိုကိုနိုင်ငံတွင်လည်း ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အမြင်၌ ဟေဂျားဘ်သည် နိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကို ခွဲခြားသည့်မူဝါဒအတွက် ဆန့်ကျင်သည့် မူဝါဒ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
၁ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ဟေဂျားဘ်
၂ အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများအကြား အမျိုးသမီးများဝတ်စားမှု နောက်ခံသမိုင်း
၃ အစ္စလာမ်မတိုင်မီကာလနှင့် ဟေဂျားဘ်
၆.၂ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ ဩဝါဒတော်များ
၆.၂.၁ အလုံခြုံဆုံးသောအနေအထားဖြင့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုရန် မိန့်ထားသောဩဝါဒတော်များ
၆.၂.၂ သာမန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြုရန်မိန့်ဆိုထားသော ဩဝါဒတော်များ
၇ ရှီအာတို့အကြားရှိ ဟေဂျားဘ်အတိုင်းအတာ
၈ အတိုက်အခံတို့၏ ရှု့ထောင့်မှ ဟေဂျားဘ်
၉ လက်ခံကျင့်သုံးသူတို့၏ ရှု့ထောင့်မှ ဟေဂျားဘ်
၁၀ ဟေဂျားဘ် မပြုမနေရသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ငံများ
၁၁ ဟေဂျားဘ်အား တားမြစ်သော နိုင်ငံများ
ဥရောပနိုင်ငံများအတွင်း မွစ်လင်(မ)တစ်ဦး ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်မှုသည် ထိုနိုင်ငံများအတွင်း၌ မွစ်လင်(မ)များရှိနေကြောင်း အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် အချို့သောနိုင်ငံများအတွင်း နိုင်ငံရေးအမြင်ကွဲလွဲမှုများနှင့် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်းကျပ်ရန်အတွက် အကြံပြုအမျိုးအမျိုး ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဟော်လန်နိုင်ငံပါလီမန်သည် မိမိနိုင်ငံအတွင်း၌ (ဘုရ်ကာအ်)ဝတ်ဆင်၍ မျက်နှာဖုံးအုပ်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာ အလားတူဥပဒေများကိုလည်း ပြင်သစ်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံများ၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အထက်ပါပုံစံအတိုင်း အလားတူ အခြားအစိုးရတစ်ခုလည်းရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းနိုင်ငံများအတွင်း အချို့သောနိုင်ငံများသည် မျက်နှာဖုံးအုပ်ခြင်းအတွက် တားဆီးရန်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အချို့သောနိုင်ငံများတွင်မူ အစ္စလာမ်အသွင်သဏ္ဌာန်ဆောင်သော (ကျာဒဲရ်)ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်စေနိုင်သော ခြုံလွှာ စသဖြင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကို တားဆီးခဲ့လေသည်။
ဤနိုင်ငံတွင် တာလီဘန်များအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဘုရ်ကာအ် (မျက်နှာအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖုံးအုပ်စေသော အဝတ်အစား)ဝတ်ဆင်ခြင်းကို မဝတ်မနေရဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့သတ်မှတ်ချက်သည် နိုင်ငံတော်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတို့အား အလွန်အမင်းတင်းကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဟာမီဒ်ကရ်ဇီသည် မိမိအားဆန့်ကျင်သူများ၏အလိုကို ဖြည့်ဆီးရန်အတွက် အမျိုးသမီးတို့၏အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟုပင် စွပ်စွဲခြင်းခံခဲ့ရလေသည်။
ဤနိုင်ငံတွင် ဦးခေါင်းကို ဖုံးအုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သီးသန့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပါ။ ယင်းနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်နေမွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးများနှင့် မြို့ပြတွင်နေထိုင်သောအချို့ မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့သည် ဟေဂျားဘ်အား အလေးထားပြုလုပ်ကြသည်။ လတ်တလောကာလတွင် ထိုနိုင်ငံ၌ ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်သူ အမျိုးသမီးအရေအတွက် ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ ယင်းနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကို ခွဲခြားသည့်မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသည့် ပါတီသည် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၌ နေရာဝင်ယူလာခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း၌ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်သော အမျိုးသမီးတို့အပေါ် တင်းကျပ်မှုများပိုမိုပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်းများတွင် ရေးသားသော အရေးအသားများကို ကြည့်ပါက ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ ထိုနိုင်ငံတွင် ဟေဂျားဘ်သည် အစ္စလာမ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကို ခွဲခြားသည့်မူဝါဒ(စကူလာရီဇင်မ်)ကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်စေလိုသည့်အတွက် ထိုသို့တင်းကျပ်မှုများပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
နဝါးလ် စအ်ဒါဝီ သည် ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ -ဟေဂျားဘ်သည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လည်း မအပ်စပ်သလို ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုကြောင့် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း မှားယွင်းပေလိမ့်မည်။ ဟေဂျားဘ်သည် သာသနာနှင့် သာသနာ၏သွန်သင်မှုအဆုံးအမများနှင့် မည်သို့မျှမပတ်သက်ချေ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်မ၏ဖခင်သည်လည်း အလ်အဇ်ဟရ်အစ္စလာမ့်မစ် တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးခဲ့သော သာသနာ့ပညာရှင်တစ်ပါးဖြစ်လေသည်။ သို့သော် သူ၏သက်တမ်းတလျှောက်လုံးတွင် ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ခြုံလွှာခြုံပါဟု မည်သို့သောအခါမျှ ကျွန်မအား ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် သာသနာ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုများနှင့် လုံးဝ သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
ထိုနိုင်ငံ၌ စကူလာရီးဇ်မ်မူဝါဒကို ကျင့်သုံးသည့်အတွက် ထိုနိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသမီးအနည်းစုသာလျှင် ဟေဂျားဘ် ပြုလုပ်ကြသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သမ္မတ ယာဟ်ယာဂျာမာဟ်သည် နိုင်ငံတော်ကို အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲကြေငြာခဲ့သည့်အပြင် အစိုးရဌာနများတွင် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ဟေဂျားဘ် ပြုလုပ်ရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ယင်းနိုင်ငံသည် ယခုအနေအထားတွင် မူရီတန်နီးယားနိုင်ငံပြီးနောက် အာဖရိကတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် «جلباب» (ဂျလ်ဘားဘ်)ဟူသော ဝေါဟာရကို ဟေဂျားဘ် ဟုသတ်မှတ်ထားကြသည်။ နိုင်ငံတော်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ၎င်းနိုင်ငံတွင် ဟေဂျားဘ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ အဓမ္မမဟုတ်ပေ။
ဟေဂျားဘ်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုများဝင်ရောက်မီ မကြာသေးမီကမှ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ များစွာသော အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတို့သည် နမားဇ်ဖတ်သည့်အခါတွင်သာ ဟေဂျားဘ် ပြုလုပ်ကြ၍ ကျန်အချိန်များတွင်မူ ဦးခေါင်း၌ ပါးလွှာသေးငယ်သော ပဝါလေးများကို ဦးခေါင်းပေါ်တွင် တင်ထားလေ့ရှိကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ခံချက်အရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မွစ်လင်(မ)ဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် (ဘာန်က်စီလီ အင်ဒိုနီရှားယီ) နိုင်ငံအတွင်းရှိ သာသနာကြီးငါးခုဖြစ်သော အစ္စလာမ်၊ ကက်သလစ်အသင်းတော်၊ ဝဘ်သိစ်အသင်းတော်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဟိန္ဒူတို့အား တပြေးညီနိုင်ငံတော်မှ အထောက်အပံ့ပြုရန် ဥပဒေမူဝါဒတစ်ရပ်ချမှတ်ပြီး မည်သည့်သာသနာကိုမျှ နိုင်ငံတော်၏တရားဝင်သာသနာဟူ၍ မကြေငြာခဲ့ပေ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဟေဂျားဘ်နေ့ ဟု သတ်မှတ်ထားသော နေ့တစ်နေ့ရှိသည်။ ထိုနေ့တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလာမ့်အစည်းအရုံးပါတီ မှ အမျိုးသမီးများမှ ဦးဆောင်၍ ၎င်းနေ့နှင့်ပတ်သက်သောအခမ်းအနားများကို ခမ်းနားစွာကျင်းပကြသည်။
ထိုနေ့တွင် အမျိုးသမီးထုကြီးသည် အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်း၌ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲများကျင်းပ၍ အချို့သော ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် ထိုသို့ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းအပြင် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း လွပ်လပ်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ကြသည်။ ထိုသို့ ခမ်းနားစွာကျင်းပသော မြို့များမှာ အစ္စလာမ်အာဘာဒ် ၊ ကရာချီနှင့်ရာဝလ်ပန်ဒီ စသဖြင့် တို့ဖြစ်သည်။
ထိုအမျိုးသမီးတို့သည် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတင်ပြကြလေသည်မှာ ဟေဂျားဘ်သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင်သာမက ယဟူဒီတို့၏သောင်ရားသ်ကျမ်းနှင့် ခရစ်ယာန်တို့၏ ဘိုင်ဘလ်ကျမ်းများတွင်လည်း ပါရှိနေကြောင်းဖြစ်သည်။ ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနောက်တိုင်းဥပရောပနိုင်ငံတို့ ၏ ပေါ်လစီများကို ရှုံ့ချရင်း ဟေဂျားဘ်သည် အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြကြလေသည်။
ထိုအတိုင်းပင် ဤနေ့၌ ဟေဂျားဘ်သည် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ဟေဂျားဘ်အားအလေးထားကြရန် ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် စာသားများရေးသား၍ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နေရာတိုင်းတွင် ချိတ်ဆွဲကြလေသည်။
အခြားနေရာဒေသများထက် နိုင်ငံ၏မြို့ကြီးများတွင် ပိုမိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပကြလေသည်။သို့သော် အစ္စလာမ်အာဘတ်မြို့သည် မြို့တော်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုမြို့၌ပို၍ ခမ်းနားစွာကျင်းပကြသည်။ထိုနေ့တွင် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာဌာနမှ သတင်းထောက်တို့သည် သတင်းယူရန်လာရောက်ကြလေသည်။
အီရန်တွင် ဟေဂျားဘ်နှင့် စပ်ဆိုင်သည့်ဥပဒေကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ်မစ် အကြံပေးလွှတ်တော်အတည်ပြုချက်အရ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအကျိုးစီမံကွပ်ကဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် ထိုသို့ပြဋ္ဌာန်းမှုအပေါ် စောဒကတက်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ "ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း အဓမ္မပြုလုပ်တင်းကျပ်မှုသည် အမျိုးသမီးများကို ဟေဂျားဘ်ဝေးသွားစေရန်ပြုလုပ်နေသလိုဖြစ်နေသည်။ ဆက်လက်၍ ထိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အာယသွလ္လာဟ် ရဖ်ဆန်ဂျာနီသည် ကိုင်ဟာန်းစာနယ်ဇင်းမီဒီယာအား ပြောဆိုခဲ့သည် စကားကို အီရန်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ်တွင် သတင်းစာ၌ ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ ထိုပြောကြားမှုမှာ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းလမ်းသစ်များကို ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက အမျိုးသမီးများနှင့် သမီးငယ်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားတော်၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ၎င်းတို့အလွယ်တကူလိုက်နာနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့်အသွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ရှေ့တော်တွင်လည်း ထိုသည်နှင့် သက်သေထူနိုင်ပေမည်။ ၎င်းအပြင် ထိုနည်းလမ်းဖြင့် အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးကိုလည်း စောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။" ဟုဖြစ်သည်။
အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများအကြား အမျိုးသမီးများဝတ်စားမှု နောက်ခံသမိုင်းပြင်ဆင်
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် နေရာဒေသအသီးသီးနှင့်အနေအထားအမျိုးမျိုးတို့တွင် ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့မြင်ခဲ့ရပေသည်။ သမိုင်းရင်းမြစ်ကျမ်းများဖြစ်သော ဝိုင်းလ်ဒိုရာန်သ်၊ ပတ်သရိုရှဖ်စကီ ရေးသားပြုစုခဲ့သာ အစ္စလာမ့်သမိုင်းကျမ်းနှင့် မွရ်သဇာရာဝန်ဒီရေးသားခဲ့သော လူမှု့ရေးသမိုင်းကျမ်းများအပြင် ပိုမိုရှေးကျသော ကျမ်းများဖြစ်သည့် ခရစ်တော်မမွေးမီအချိန်ကာလများတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဂရိသမိုင်း နှင့် ဟရူဒူသ်ရေးသားခဲ့သော လောကီသမိုင်းကျမ်း စသည်တို့မှ သက်သေထူနေသည်မှာ ထိုခေတ်ကာလများ၌ နေထိုင်ခဲ့သော လူတို့သည် အမျိုးသားဖြစ်စေ(သို့)အမျိုးသမီးဖြစ်စေ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအကြားသို့ သွားရောက်ကြမည်ဆိုပါက အနည်းနှင့်အများ မိမိတို့၏ဦးခေါင်းများကို ဖုံးအုပ်၍ သွားလာကြလေ့ရှိသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ဟေဂျားဘ်သည် အစ္စလာမ်မှ စတင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပဲ အစ္စလာမ်မတိုင်မီ ထိုခေတ်ကာလများကတည်းက ဟေဂျာဘ်သည် လူတို့အကြား၌ ရှိနေခဲ့ပေသည်။သို့သော် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်မှုအတိုင်းအတာအားဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက်များ၌ ကွာဟချက်များရှိခဲ့သည်။
သို့သော် အချို့သော သုတေသီများက ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ခြင်းကို အစ္စလာမ်နှင့် အာရဗ်တို့၏ဓလေ့ထုံးစံဟု သတ်မှတ်ကြလေသည်။သို့သော်အချို့ကလည်း ဆံပင်ကိုဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်း(ဆံပင်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်း)သည် အစ္စလာမ်နှင့်အာရဗ်တို့၏ ဓလေ့မဟုတ်ပဲ အာရဗ်တို့သည် အခြားနေရာဒေသများကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသော ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသောသူတို့အကြား သိက္ခာရှိသူများက မိမိတို့၏ဦးခေါင်းများကို ဖုံးအုပ်သည့်အပေါ် အာရဗ်တို့သည်ဖုံးအုပ်ခြင်းသည် သိက္ခာရှိခြင်းဟုမှတ်ယူခဲ့ကြပြီး ထိုဓလေ့ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ဟာရ်ဝါရ်ဒ် တက္ကသိုလ်မှ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ဂိုဏ်းဂဏ္ဍ သုတေသီပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ လိုင်လားအဟ်မဒ်မှ ဤသို့ပြောဆိုထားသည်မှာ -ဟေဂျားဘ်ပြုခြင်း(ဖုံးအုပ်ခြင်း)သည် အခြားသောဒေသများ၏ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ပြီး စစ်ရေးအောင်နိုင်ခဲ့မှုအပေါ် ၎င်းတို့၏ဓလေ့သည် အာရဗ်အမျိုးသမီးတို့အကြားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ခြင်း(အဝတ်စောင်းခြင်း)သည် အမှန်တကယ်လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ဆာဆာနီမင်းဆက် ခေတ်ကာလအချိန်၌ လူတို့အကြားတွင် ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့အကြားခွဲခြားသိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်များအကြား ဦးခေါင်းခြုံသည့် ဓလေ့ရှိခဲ့ပြီး မြေထဲပင်လယ် ဒေသများတွင် အစ္စလာမ်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဦးခေါင်းခြုံခြင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာလေသည်။ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ခေတ်ကာလတွင်လည်း မိမိ၏ကြင်ယာတော်များနှင့် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့ အကြား ခြုံလွှာခြုံမှုများရှိခဲ့သည်။ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) လောကကြီးကို နှုတ်ဆက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အခြားသော ဒေသများကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသများတွင် မျိုးရိုးဂုဏ်ရည်မြင့်မားသော အမျိုးသမီးတို့သာလျှင် မိမိတို့၏ဦးခေါင်းများကို ခြုံလွှာစောင်း၍ ဖုံးအုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ထိုခေတ်ကာလများတွင် ခြုံလွှာစောင်းမှုသည် ထိုသူတို့အတွက် သာဖြစ်သွားခဲ့လေသည်။
မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန်ရဂျဘီ ဆိုလေသည်မှာ - အစ္စလာမ်မတိုင်မီကာလများတွင် အာရဗ်တို့အကြား စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများရှိနေသော်ငြားလည်း ၎င်းတို့နေထိုင်ကျက်စားသောရေ၊မြေပထဝီဆိုးရွားမှုများကြောင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအားလုံးတို့သည် မိမိတို့၏ဦးခေါင်းများကို ဖုံးအုပ်ထားကြလေသည်။အမျိုးသားတို့၏ဦးခေါင်းပေါ်၌ အဝတ်စများစောင်းထားကြသလို အမျိုးသမီးတို့သည်လည်းမိမိတို့၏ဦးခေါင်းများပေါ်တွင် တောင်ရှည် ခြုံလွှာများစောင်းလေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အစ္စလာမ်ပွင့်ပေါ်လာပြီးအချိန်ထိ ယင်းသူတို့သည် မိမိတို့ ဓလေ့အတိုင်း အပြင်သွားသည့်အခါ အဝတ်(သို့)ခြုံလွှာများကို ခေါင်းပေါ်၌စောင်း၍ သွားလာလေ့ရှိခဲ့သည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ဦးခေါင်းကို ဖုံးအုပ်၍ သွားလာခဲ့ကြသည်။သို့သော် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) မက္ကာမြို့မှ မဒီနာမြို့သို့ (ဟိဂျ်ရသ်ပြု)ပြောင်းရွေ့နေထိုင်၍ အစ္စလာမစ်အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ပြီးသကာလ မဒီနာမြို့တွင် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှောက်ယှက်ခြင်းခံရမှုအပေါ် ဟေဂျားဘ်နှင့် ပတ်သက်သည့်အာယသ်တော်ကျရောက်ခဲ့လေသည်။ထိုသို့အာယသ်မကျရောက်မီအချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့သည် ခြုံလွှာများကို မိမိတို့ခန္ဓာ၏အရှေ့ဘက်ကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိပဲ အမျိုးသားများကဲ့သို့ နောက်ကျောဘက်သို့ ချထားလေ့ရှိသည်။သို့သော် အာယသ်တော်ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ ဟေဂျားဘ်အား အာယသ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ မျက်နှာနှင့် လက်ကောက်ဝတ်မှ လက်ချောင်းလေးများအထိမှလွဲ၍ ကျန်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားခဲ့ကြလေသည်။ထိုမှတဆင့် ဟေဂျားဘ်သည် အမျိုးသမီးတို့အားလုံးအတွက် အရှင်မြတ်ဘက်မှ ဥပဒေတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ယခုခေတ်ပညာရှင်များ၏ပြောကြားချက်အရ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ခေတ်ကာလများတွင် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့သည် ဆံပင် ၊ လည်ပင်၊လက်နှင့်ခြေထောက်များကိုပါ ဖုံးအုပ်ထားကြသည်။ထိုသို့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် တမန်တော်အီဗရာဟင်(မ)(အ.စ)၏ခေတ်ကာလများတွင်လည်းထိုအတိုင်းဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်သည် ထိုဓလေ့ကို ဆက်လက်၍ အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့လေသည်။ အာယသွလ္လာဟ် မွရ်သဇာမွတ်သွဟရီသည် ဟေဂျားဘ်အား တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ခေတ်ကာလ၌ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ခိုင်မာလာခဲ့သည်။ ကြင်ယာတော်အာယေရှာထံမှဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ - အာန်ဆွားရ် အမျိုးသမီးတို့အားချီးကြူးထိုက်ပါအံ့။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသူမတို့သည် ဟေဂျားဘ်နှင့် ပတ်သက်သောအာယသ် ကျရောက်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် အပြင်ထွက်သည့်အခါ ယခင်ကဲ့သို့ထွက်ခြင်းမပြုတော့ပဲ ခြုံလွှာအပြည့်နှင့် အနက်ရောင်ခြုံလွှာများစောင်းကာ အပြင်ထွက်သည့်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသူမတို့ကြည့်လိုက်ပါက သူမတို့၏ဦးခေါင်းယံများပေါ်တွင် အနက်ရောင်ကျေးငှက်များ ခိုနားနေသည့်အလားမြင်တွေ့ရပေသည် ဟု တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ချီးမွမ်းကာ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ သို့သော် ဟေဂျားဘ်ကိုဝါဂျီဘ်(မလုပ်မနေရ)ဟု ယူဆသူတို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ခေတ်ကာလ၌ လူတို့သည် အလွန်မှပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြပြီး ဝတ်ဖို့ရန်ပင် အဝတ်အစားအလုံအလောက်မရှိကြချေ။ ချုပ်လုပ်၍ ဝတ်စားရန်အတွက်ပင် ပိုမိုခက်ခဲလှပေသည့်အတွက် ဟေဂျားဘ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ခေတ်၌ ထိုသို့မရှိကြောင်းဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြလေသည်။ထိုသို့ဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြသူတို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ခေတ်ကာလ၌ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲသားအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အလွန်မှပင် တိုသောလုံချည်ကဲ့သို့သော အဝတ်များကို ခါးတွင်ပတ်ထားရသည့်အတွက် စဂျ်ဒါပြုလုပ်သည့်အခါ အချို့သောအချိန်များတွင် မိမိတို့၏အရှက်အင်္ဂါများပေါ်နေခဲ့သည် ဟူသော ရေဝါယသ်တော်များကို လက်ကိုင်ထား၍ သက်သေထူကြသည်။ထိုခေတ်၌ အင်္ကျီမဝတ်မှုသည် သာမန်ဖြစ်ပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ပင် မိမိ၏ဦးရီးတော်အား အင်္ကျီမပါပဲ အပြင်မထွက်ရန်မိန့်ဆိုခဲ့မှုများလည်းရှိခဲ့သည်။ထိုခေတ်ကာလတွင် ဆင်းရဲသားတို့သည် မလုံလောက်သော အဝတ်အထည်များဖြင့် မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးအုပ်ရသည်အထိဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို ဆန့်ကြင်မှုလုပ်ရပ်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့မှုအပေါ် ယင်းဆင်းရဲသားများအား အဝတ်အစားကိုလျှော်ကြေးအဖြစ်ပေး၍ မိမိတို့၏အပြစ်များကို ပြန်လည်ချေပရန်ပင် မိန့်ထားခဲ့မှုများရှိခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထိုခေတ်၌ ဆင်းရဲသားများငြူစူမှုမရှိရလေစေရန် မိမိတို့လုံချည်ကဲ့သို့သော အဝတ်အစားများကို ရှည်ရှည်မဝတ်ကြရန် လူတို့အားမှားကြားနေခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ထိုအချိန်ကာလတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ရေခွက်တစ်ခုအတွင်း၌ အတူဝဇူပြုခဲ့ကြသည်။သို့သော် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ရောနှော၍ အတူရေမချိုးကြရန် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။
၎င်းတို့၏ပြောကြားချက်များအရ အစ္စလာမ့်ကနဦးပိုင်းတွင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် လူတန်းစားအပေါ်မူတည်နေပြီး ချမ်းသားကြွယ်ဝသူတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် မရှိဆင်းရဲသားများထက် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံမှုရှိသည် ဟုပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် လူတို့အား လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမပြုရန် မှာကြားလေ့ရှိသည်။တွရ်ကာရှူးန်ဒ်သည် ဆင့်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့် လာရှိထားသော ရေဝါယသ် တစ်ခုအား ဤသို့ဖေါ်ပြထားလေသည်မှာ -တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကြင်ယာတော်များသည် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)အားမေးကြသည်မှာ-ခါးအောက်၌ ဝတ်ဆင်သော အဝတ်သည် အမျိုးသမီးတို့အဖို့ မည်မျှရှည်လျှားသင့်သနည်း။ထိုအခါ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)မှ တစ်ထွာဟုမိန့်တော်မူလေသည်။ထိုအခါ ကြင်ယာတော်များမှ "တစ်ထွာသည် အလွန်နည်း၏ မလုံလောက်ပါ ထိုတစ်ထွာမျှသာဝတ်ပါက အရှက်အင်္ဂါများပင် ပေါ်နိုင်သည်ဟု ပြန်လည်လျှောက်ထားလေသည်။ထိုအချိန်တွင် တစ်တောင်မျှသာရှည်လျှင်ရသည်ဟု မိန့်တော်မူလေသည်။ထိုအခါ ထပ်မံ၍ "အိုရစူလ် တစ်တောင်သည်လည်း အလွန်နည်းပါ၏။ထိုမျှသာဝတ်ပါက ခြေထောက်များပေါ်လွင်နေမည်ဟု လျှောက်ထားကြပြန်သည်။ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မှ တစ်တောင်သည်သာ လုံလောက်ပေသည်ဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။(ဘာသာပြန်သူ၏ အမြင်တွင် ဤရေဝါယသ်တော်သည် မှန်ကန်မှုမရှိပါ ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းရေဝါယသ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထက်ပင် ကြင်ယာတော်များက ပိုမိုသိနားလည်နေသလို မြင်မိပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ကြင်ယာတော်များသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထက်ပင် အသိတရားပိုမိုရှိနေသလို ပြောဆိုထားသည့်အတွက် လက်ခံနိုင်ချေအလျဉ်းမရှိနိုင်ပါ)
သူသည် ထပ်မံ၍ဖြည့်စွက်ပြောဆိုလေသည်မှာ ထိုနည်းတူရေဝါယသ်တော်များသည် အခြားကျမ်းများဖြစ်သော စူနန်နွလ်ကွဘ်ရာ၊မွစ်နဒ်-ဒေ-အဟ်မဒ်အိဘ်နေဟမ်ဘလ်နှင့် စွန်နန်အိဘ်နေမာဂျာကျမ်းတို့တွင်လည်း လာရှိထားလေသည်။ و
၎င်းသူတို့ပြောကြားချက်အရ ဦးခေါင်းပေါ်၌ ခြုံလွှာစောင်းခြင်းသည် အာရဗ်အသိပညာမဲ့သော ခေတ်ကာလ၏ဓလေ့ဖြစ်သည်။သို့သော် အစ္စလာမ်တွင် ထိုသို့အမိန့်တော်မရှိပါ။အာရဗ်တို့အကြား ဝမ်းနည်းပူဆွေးသောကများရောက်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ ဦးခေါင်းများပေါ်၌ ခြုံပဝါမပါပဲ သွားလာမှုများသည် ၎င်းတို့၏ထုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
မိမိတို့၏ အဝတ်အစားများကွဲဟနေမှုတို့ကို သတိထားကြလော့ ဟု ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှ မိန့်ဆိုရသည့်အကြောင်းအရင်းသည် အာရဗ်တို့အကြားတွင် ၎င်းတို့သည် မချုပ်မလုပ်ရသေးသော လုံချည်များကို ခါးတွင်ဝတ်ဆင်ကြသည့် အတွက် ၎င်းတို့လမ်းသွားသည့်အခါ(သို့)ထိုင်သည့်အခါနှင့်ထသည့်အခါများတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထိုမချုပ်ထားသောနေရာမှ ၎င်းတို့၏ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများပေါ်လေ့ရှိသည်။ထို့ကြောင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှ ထိုသို့မိန့်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ ထိုသို့အရှက်အင်္ဂါများ ပေါ်သည့်အခါတွင်လည်း ကြည့်ခြင်းမှရှောင်ရှားကြရန် မိန့်ထားမှုလည်းရှိပေသည်။
ဆက်လက်၍ ပြောဆိုသည်မှာ -တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ခေတ်ကာလနှင့် အေမာမ်(အ.စ)တို့၏ ခေတ်ကာလများတွင်လည်း အမျိုးသမီးတို့သည် ချုပ်လုပ်ပြီးသော လုံချည် အင်္ကျီ စသော အဝတ်အစားများကို ဝတ်လေ့ရှိကြပြီး ခြုံလွှာစများကို မိမိတို့၏ပုခုံးပေါ်များတွင် ခြုံကာ ဦးခေါင်းများကို (မက်နအာဟ်)ဟုသော ခြုံလွှာအမျိုးအစားတို့ဖြင့် ခြုံလွှားဖုံးအုပ်လေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ရှီအာနှင့်စွန္နီတို့၏ ဓမ္မသတ်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကျေးကျွန်မတို့အတွက် ဆံပင်ကိုဖုံးအုပ်ရန် (ဝါဂျီဘ်)မလုပ်မနေရ မဟုတ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားလေသည်။.
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် အမျိုးသမီးများ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စူရာ-ယေ-နူးရ် အာယသ်တော်အမှတ် ၃၀ နှင့် ၃၁ တွင်လည်းကောင်း စူရာ-ယေ-အဲဟ်ဇားဘ် အာယသ်တော်အမှတ် ၅၉ တွင်လည်းကောင်း မိန့်ဆိုထားလေသည်။ စူရာ-ယေ-နူးရ်တွင် မိန့်ဆိုချက်မှာ-
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ
(အိုနဗီ တမန်တော်) အသင်သည် မို့အ်မင်န်အပေါင်းတို့အား မိမိတို့၏မျက်လွှာများကို (သူစိမ်းအမျိုးသမီးတို့ရှေ့ဝယ်)အောက်သို့ ချထားရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ထို့ပြင် မိမိတို့၏အရှက်အင်္ဂါများကို ထိန်းသိမ်းကြရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း ပြောကြားပါလေ။ဤသည်၎င်းတို့အဖို့ အစင်ကြယ်ဆုံးပင်ဖြစ်ချေသည်။ဧကန်အမှန်ပင် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့ပြုမူခဲ့မှုတို့အား အသိရှိဆုံးသော အရှင်ဖြစ်ပေသတည်း။(စူရာနူးရ်(၃၀)
وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ یَغْضضنَ مِنْ أَبْصرِهِنَّ وَ یحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا مَا ظهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسائهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَت أَیْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِینَ غَیرِ أُولی الارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظهَرُوا عَلی عَوْرَتِ النِّساءِ وَ لا یَضرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ
(အိုနဗီတမန်တော်)အသင်သည် သက်ဝင်ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတို့အား (ဤသို့)ပြောကြားပါလေ။၎င်းသူမတို့သည် မိမိတို့၏မျက်လွှာများကို အောက်သို့ချထားကြရမည်။ထို့အပြင်၎င်းသူမတို့သည် မိမိတို့၏အရှက်အင်္ဂါများကို (ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကျူးလွန်ခြင်းမှ )ထိန်းသိမ်းကြရမည်။၎င်းအပြင် မိမိတို့တွင် အမြဲပေါ်လွင်လျှက်ရှိသော အလှများမှအပ ကျန်အလှအပများအားလုံးကို(သူစိမ်းယောကျ်ားတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်)ဖေါ်ပြခြင်းမပြုပဲ ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ထို့အပြင် မိမိတို့၏ဦးခေါင်းခြုံလွှာများကို မိမိတို့ရင်ဘတ်များပေါ်ထိချထားရမည်။ထိုမှတစ်ပါး ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏အလှကို မိမိတို့၏လင်ယောကျ်ားများ(သို့)မိမိတို့၏ဖခင်များ(သို့)မိမိတို့၏လင်ယောကျ်ားများ၏ဖခင်များ(သို့)မိမိတို့၏သားများ(သို့)မိမိတို့၏လင်ယောကျ်ားတို့၏သားများ(သို့)မိမိတို့၏အစ်ကိုများ၊မောင်များ(သို့) အစ်ကိုမောင်တို့၏သားများ(သို့) အမ၊ညီမ တို့၏သားများ(သို့) မိန်းမအချင်းချင်းအကြား(သို့)မိမိတို့မှ ပိုင်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးများ(ကျေးကျွန်မများ)(သို့) အမျိုးသမီးများကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသော မိမိတို့၏ကျေးကျွန် အမျိုးသားများ(သို့)အမျိုးသမီးများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို မသိနားမလည်သေးသော ကလေးသူငယ်များမှလွဲ၍ အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ရှေ့မှောက်တွင်မျှ မဖေါ်ပြရ။ထို့ပြင် ၎င်းသူမတို့သည် မိမိတို့လျှို့ဝှက်ထားကြသော တန်ဆာများကို (သူတစ်ပါးတို့)သိရှိရန် မိမိတို့၏ ခြေများကို ဆောင့်၍ မနင်းကြရ။ထို့ပြင် မိုအ့်မင်န်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ အောင်မြင်မှုရရှိကြအံ့သောအလို့ငှာ အသင်တို့အားလုံးတို့သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ရှေ့တောမှောက်ဝယ်ဝန်ချတောင်းပန်ကြလေကုန်။(စူရာနူးရ်(၃၁)
အများ၏အဆိုအရولیضربن بخمرهن علی جیوبهنဟူသော ဝါကျသည် အမျိုးသမီးတို့အတွက်ဖုံးအုပ်ရမည့်အတိုင်းအတာကိုပြနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။အာယသွလ္လာဟ်မွသ်သွဟေရီသည် မိမိ၏သဖ်စီးရ်ကျမ်းတွင် အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်ဆင့်ပြန်ထားသော မိန့်ကြားမှုတစ်ရပ်ကို တင်ပြထားသည်မှာ- အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ဆံပင်၊ရင်ဘတ်၊လည်ပင်းနှင့် လည်ပင်းအောက်ပိုင်းတို့ကိုဖုံးအုပ်ထားရမည်ဖြစ်ပေသည်။ထိုအတိုင်းပင် ၎င်းသည် သဖ်စီးရ်ရေမဂျ်မာအွလ်ဘယားန်းကျမ်းမှ ဍီကာဖွဲ့ တင်ပြထားချက်ကို အခြေခံ၍ ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည်မှာ အမျိုးသမီးတို့သည် ယခင်က မိမိတို့၏ခြုံထည်များကို အနောက်ဘက်သို့ချထားသည့်အတွက် ၎င်းသူမတို့၏ရင်ဘတ်များသည် ပေါ်လွင်နေပေသည်။
မိုဟမ္မဒ်ဟိုစိုင်းန် သွဘာသွဘာအီ သဖ်စီးရ်(ဍီကာ)ပညာရှင်ကြီး၏တင်ပြမှု
(خمر) ဟူသောဝေါဟာရသည် (خمار) ဝေါဟာရ၏အများကိန်းဖြစ်သည်။ ယင်းဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အမျိုးသမီးသည် ထိုအရာ(အဝတ်စ)ဖြင့် မိမိ၏ဦးခေါင်းကို ပတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ထိုသို့ ပတ်ရာမှ ကျန်နေသောအစကို မိမိ၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ ချထားခြင်းဖြစ်သည်။(جیوب)သည်جیب၏အများကိန်းဖြစ်သည်။၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ရင်ဘတ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းဝေါဟာရနှစ်ခုအားပေါင်းစပ်လိုက်မည်ဆိုပါ ဤသို့အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပေါ်လာမည်မှာ "မိမိတို့၏ဦးခေါင်းခြုံလွှာအစများကို ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ချထားပြီး မိမိတို့၏ရင်ဘတ်များကို ထိုခြုံလွှာများဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ"ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မိုဟမ္မဒ်ဘာကိရ် ဘဲဟ်ဘူဒီ(သာသနာ့သုတေသီ)မှ အထက်ပါ မုက္ခပတ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးသားဖွင့်ဆိုသည်မှာ:
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ မိန့်ဆိုမှု၏ ဆိုလိုရင်းမှာ - အိုအမျိုးသမီးတို့ အသင်မတို့သည် မိမိတို့၏ ခေမားရ် ဟူသော ခြုံလွှာများကို ဦးခေါင်းတွင် မရစ်ပတ်ကြပါနှင့် ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်မတို့ လမ်းလျှောက်သည့်အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဦးခေါင်းတွင်ရစ်ပတ်ထားသော အဝတ်စများပြေသွားနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အသင်မတို့သည် ထိုခြုံလွှာများကို ဦးခေါင်းမှ စ၍ ခြုံလွှားပြီး မေးစေ့အောက်တွင် ထုံးထားကြရန်(သို့)ချိတ်တွယ်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။သို့မှသာအသင်မတို့၏ရင်ဘတ်များကိုပါ ဖုံးအုပ်ပြီးသားဖြစ်သလို လမ်းသွားသည့်အခါတွင်လည်း လုံခြုံမှုရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ထိုသို့ ခြုံလိုက်မည်ဆိုပါက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံး လုံခြုံသွားမည်ဖြစ်သလို ထိုခြုံထည်သည် မိမိ၏လက်ဖျံအထိ ဖုံးအုပ်ပြီးသားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ထိုအရာကို လုံချည်ကဲ့သို့ အနည်းငယ်ထပ်မံရှည်လိုက်မည်ဆိုပါက တစ်ကိုယ်လုံးလုံခြုံသွားမည်ဖြစ်သလို ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသည့်အခါတွင်လည်း မည်သို့မျှပေါ်နိုင်ဖွယ်ရာအကြောင်းရှိတော့မည်မဟုတ်ချေ။အကယ်၍ ထိုသို့အနေအထားတွင် ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် လက်ဖျံထိ ပေါ်ခဲ့မည်ဆိုပါကလည်း အကြောင်းမဟုတ်ပေ။
အချို့သော စာရေးဆရာများက အထက်ပါ မုက္ခပတ်တော်တွင် (ခေမါးရ်)ဝတ်ခြင်းသည် ဝါဂျီဘ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆံပင်ကိုပါဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ဆိုလိုရင်းအပေါ် သံသယဖြစ်ခဲ့မှုများရှိခဲ့ကြပေသည်။အမီးရ် ဟိုစိုင်းန် သရ်ကာရှူန်းဒ် ပြောကြားသည်မှာ-ဆံပင်အားဖုံးအုပ်မှုကြောင့် လည်ပင်းနှင့် ရင်ဘတ်များကိုပါ ဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ဆိုထားခြင်းသည် အလွန်ပင် အားနည်းသောပြောကြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ထိုအတိုင်းပင် ယင်းမုက္ခပတ်တော်မကျရောက်မီ အမျိုးသမီးတို့အကြား ခြုံလွှာများခြုံမှုသည် တရားတော်အရဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်းသည်လည်း မှားယွင်းပေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းမုက္ခပတ်တော်မကျရောက်မီနှင့်ကျရောက်ပြီး ကာလများတွင် ဦးခေါင်းခြုံလွှာနှင့် ပတ်သက်သည့်မုက္ခပတ်တော် ကျရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ထို့အကြောင့် အထက်ပါမုက္ခပတ်တော်တွင် (ခေမာရ်)ခြုံလွှာကို မိမိတို့၏ရင်ဘတ်ဖုံးအုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြောင်းခံတစ်ခုအဖြစ်သာ ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
စူရာ-ယေ-အဲဟ်ဇားဘ် အာယသ်တော်အမှတ်(၅၉)တွင်လည်း အမျိုးသမီးတို့ ခြုံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်ဆိုထားလေသည်။ ယင်းအာယသ်တော်တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မို့အ်မင်န်အမျိုးသမီးတို့အား ကြီမားကျယ်ပြန့်သော (ဂျုလ်ဘားဘ်)တည်းဟူသော ခြုံလွှာကြီးများကို မိမိတို့ ဦးခေါင်းမှနေ၍ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ရန်မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထိုသို့ဖြင့် ကျေးကျွန်မများနှင့် လွပ်လပ်သောအမျိုးသမီးတို့အကြား ကွဲပြားသွားနိုင်ပြီး လွပ်လပ်သောအမျိုးသမီးများ ကာလသားတို့၏နှောက်ယှက်မှုရန်မှ လွတ်ငြိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ۚ ذٰلِکَ أَدْنَیٰ أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ ۗ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا
အိုနဗီတမန်တော် အသင်သည် မိမိ၏ကြင်ယာဇနီးများကိုလည်းကောင်း မိမိ၏သမီးတော်များကို လည်းကောင်း မို့အ်မင်န်သူတော်စင်တို့၏ဇနီးများကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ ခြုံလွှာဝတ်ရုံများကို ခန္ဓာကိုယ်များပေါ်သို့ တွဲလဲချထားရမည်ဟု ပြောကြားပါလေ။ဤသည်ကား၎င်းတို့ကို ခွဲခြားမှတ်မိစေရန် ပိုမိုနီးကပ်၏။သို့ဖြစ်ရာ ၎င်းသူမတို့သည် နှောက်ယှက်ခြင်းခံကြရမည်မဟုတ်ချေ။ထိုပြင် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည် အလွန်တစ်ရာခွင့်လွှတ်ပလပ်တော်မူသောအရှင်နှင့် အလွန်တစ်ရာသနားကြင်နာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပေသတည်း။(စူရာ အဲဟ်ဇားဘ်-၅၉)
ထိုအာယသ်တော်တွင် ခြုံလွှာဝတ်ရုံ ဝတ်ဆင်မှုသည် မည်သည့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောက်နုတ်တင်ပြရာတွင် အမြင်ကွဲလွဲမှုများရှိနေပြန်သည်။၎င်းအပြင် "ဤသည်ကား၎င်းတို့ကို ခွဲခြားမှတ်မိစေရန် ပိုမိုနီးကပ်၏။သို့ဖြစ်ရာ ၎င်းသူမတို့သည် နှောက်ယှက်ခြင်းခံကြရမည်မဟုတ်ချေ။"ဟူသော ဝါကျနှင့်ပတ်သက်၍လည်း တင်ပြထားမှုများရှိပေသည်။မွရ်သဇာမွသွဟ်ဟရီမှ ရေးသားတင်ပြသည်မှာ - (သဖ်စီရ်)ဍီကာဖွင့်ဆိုသောပညာရှင်များ၏အဆိုအရ -တနေ့၌ မိုနာဖိက်(အယောင်ဆောင်မွစ်လင်မ်)များအတွင်းမှ အချို့သူတို့သည် ညဥ့်ဦးယံအချိန်တွင် ကျေးကျွန်မများအား နှောက်ယှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။အထက်တွင်တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကျေးကျွန်မတို့အဖို့ ဦးခေါင်းအားဖုံးအုပ်ရန် အမိန့်တော်လာရှိထားခြင်းမရှိပါ။ထိုသို့ဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ယင်းလူငယ်အုပ်စုသည် ကျေးကျွန်မဟုတ်သော အမျိုးသမီးများကိုပါ နှောက်ယှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး မိမိတို့သည် ၎င်းသူမတို့အား ကျေးကျွန်မများထင်၍ နှောက်ယှက်မိခဲ့ကြောင်း အကြောင်းပြပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ကျေးကျွန်မဟုတ်သော အမျိုးသမီးတို့အား ဝတ်ရုံခြုံလွှာများမပါရှိပဲ အိမ်အပြင်သို့မထွက်ရန်နှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်စားမှုပြီးမှ အပြင်သို့သွားလာကြရန် အမိန့်တော်လာရှိခဲ့သည်။သို့မှသာ ကျေးကျွန်မတို့နှင့် ကျေးကျွန်မ မဟုတ်သူတို့အကြား ခွဲခြားမှတ်မိစေနိုင်မည်ဖြစ်၍ နှောက်ယှက်မှုရန်မှလည်းကင်းဝေးမည်ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့တင်ပြမှုသည်လည်း ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသို့ဆိုလိုရင်းသည် ကျေးကျွန်မများကို လွပ်လပ်စွာနှောက်ယှက်ခွင့် ရှိနေသလို ထင်မြင်နေရပေသည်။တမ်းပလိတ်:پانویسနေးလ်ဖိုင်ယားဇ်အမည်ရှိ စာရေးဆရာတစ်ဦးမှလည်း အထက်ပါအာယသ်တော်၏ ဆိုလိုရင်းကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြား အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်သာ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတို့အဖို့ ခြုံလွှာဝတ်ရုံခြုံရန် ဓမ္မသတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်မဟုတ်ဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့လေသည်။၎င်းသူသည် မိမိ၏အမြင်ကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေထူရန်အတွက် ဒုတိယခလီဖှာ အိုမရ် လက်ထက်၌ ကျေးကျွန်မတို့အား ဦးခေါင်းခြုံလွှာခြုံခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သော ရေဝါယသ်တော်များကို သက်သေပြုခဲ့လေသည်။
သမီးမိန်းကလေးများကို ဟေဂျားဘ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားပို့ချမှု
အမျိုးသမီးများ မိမိတို့၏ ခန္ဓာအားဖုံးအုပ်ရန်အတွက် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မှ မိန့်ကြားချက်များအတွင်းမှ အကျော်ကြားဆုံးသည် ဤရေဝါယသ်တော်သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ တစ်နေ့ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ဇနီးသည်ဖြစ်သူ အာယေရှာ(သို့) အွမ္မေစလ်မာ၏ အိမ်၌ ရှိနေခဲ့စဉ် အရွယ်ရောက်ခါစ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ မနှစ်သက်ခဲ့ပုံအား ပြောကြားရင်း မိန့်တော်မူလေသည်မှာ - အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏လက်ဖဝါးလက်နှစ်ဘက်နှင့် မျက်နှာသာ ပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟုဖြစ်သည်။ ယင်းဟဒီးစ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းတွင် အယူကွဲလွဲမှုများရှိပေသည်။ဥပမာအနေဖြင့်တင်ပြရလျှင် စိုနန်-နေ-အဘီဒါဝူးဒ် ရေးသားပြုစုသူသည် ယင်းဟဒီးတော်နှင့်ပတ်သက်၍ အားနည်းကြောင်း သက်သေထူခဲ့သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းဟဒီးစ်တော်အား ဆင့်ပြန်သူသည် ခါလိဒ်ဘင်န်ဒရီးက် ဆိုသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။၎င်းသည် အာယေရှာအား မမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဟဒီးစ်ကို တိုက်ရိုက် အာယေရှာထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်းဟဒီးစ်သည် အားနည်းချက်ရှိသော ဟဒီးစ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ထို့အပြင် ခြုံလွှာခြုံခြင်းအား ဆန့်ကျင်သော အချို့ဖိုကဟာ(ဓမ္မသတ်ပညာရှင်)များသည် ဆံပင်အား ဦးခေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းဟူ၍ မသတ်မှတ်ကြသလို အထက်ပါဟဒီးစ်တော်သည် ဦးခေါင်းကို ခြုံခြင်းနှင့် လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်း သက်သေထူကြသည်။
ရှီအာတို့၏ရေဝါယသ်တော်များတွင်လည်း အမျိုးသမီးတို့ ခြုံလွှာခြုံခြင်းသည် အရေးကြီကြောင် းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှ လာရှိထားသော ဟဒီးစ်အမိန့်အဆိုများရှိထားပေသည်။ အဘ်ဒုလ်ဟိုစိုင်းန်ခွစ်ရိုပနာဟ်သည် သွဘ်ရစီရေးသားပြုစုခဲ့သော မဂျ်မာအူလ်ဘယာန်းသဖ်စီရ်ကျမ်းတွင် ဖေါ်ပြထားသောဟဒီးစ်တော်တပုဒ်အား တင်ပြ၍ ထိုဟဒီးစ်တော်အရ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် အမျိုးသမီးတို့အား သူစိမ်းယောက်ျားများရှေ့တွင် (ဒရ်အ်)၊(ခေမားရ်)၊(အာဇားရ်)နှင့် (ဂျွလ်ဘားဘ်)ကဲ့သို့သော ခြုံလွှာများဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို ဖုံးအုပ်၍နေကြရန်မှာကြားတော်မူခဲ့သည်။အခြားရေဝါယသ်တော်တစ်ခုတွင် လာရှိထားသည်မှာ -တစ်နေ့တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မျက်မမြင်အဘိုးအိုတစ်ဦးနှင့်အတူ သမီးတော်ဖှာသေမာ၏အိမ်သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ထိုအခါ သမီးတော်သည် ထိုမျက်မမြင်အဘိုးအိုကို မြင်သည်နှင့် အခန်းတွင်းသို့ပြေးဝင်သွားပြီး မိမိခန္ဓာအပေါ်ခြုံလွှာခြုံလွှားခဲ့သည်။
အမီးရ်ဟိုစိုင်းန် သရ်ကာရှူးန်ဒ် သည် "အမျိုးသမီးသည် عورت တည်းဟူသော အရှက်ဖြစ်သည်"ဟု တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံမှလာရှိထားသည့် ​ရေဝါယသ်တော်သည် ဟေဂျားဘ်(ခြုံလွှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားဖုံးအုပ်ခြင်း)နှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။၎င်းမှ ဖိုကဟာဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအတွင်းမှ အလ္လာမာဟီလ္လီ နှင့် ဂျဝါဟီရ်ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုသူတို့၏နာမများကို ရေရွတ်ရင်း "ယင်းဟဒီးစ်သည် ဖိုကဟာတို့အတွက် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ဟဒီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။သို့သော် ဤသို့မဟုတ်ပေဟုပြောကြားခဲ့လေသည်။ထို့နောက် ၎င်းမှဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာ ဤဟဒီးစ်တော်သည် ရင်းမြစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်တွင် တင်ပြရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိနေရသော်လည်း ဆိုလိုရင်းသည် အခြားအကြောင်းအရာအပေါ်၌ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်မှာ အမျိုးသမီးတို့အား အိမ်အတွင်း၌သာနေကြရန်နှင့် အမျိုးသမီးတို့အဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာသည် အိမ်အတွင်းသာဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားထားခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအပြင် ဤဟဒီးစ်သည် စစ်မှန်မှု၌ အားနည်းချက်များရှိနေပေသည်။၎င်းအပြင် အခြားသော ဖိုကဟာတို့မှလည်း ယင်းဟဒီးစ်တော်၏ စစ်မှန်မှုအပေါ် သံသယများရှိနေခဲ့သလို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအပြင် ဆံပင်ကိုပါဖုံးအုပ်မှုအပေါ်သက်သေထူရာတွင်လည်း သံသယများရှိနေပြန်သည်။တဖန် ဆူဇန်ချီယ် ဆိုသူကလည်း ၎င်းဟဒီးစ်ကို ဆင့်ပြန်သူများသည် မှန်ကန်သူများဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံခဲ့ပြီး ဖိုကဟာများမှ ထိုဟဒီးစ်တော်အား ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ အထောက်အထားပြုခြင်းကို ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှီအာတို့၏အေမာမ်(အ.စ)များထံမှ ဆန့်ကျင်ဘက် ရေဝါယသ်တော်များ လာရှိထားသလို ဟေဂျားဘ်အား ထောက်ခံသူနှင့် ဆန့်ကျင်သူ ဖိုကဟာ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်မျိုးစလုံးတို့သည် ထိုရေဝါယသ်တော်များမှ အမျိုးမျိုးသော ယူဆမှုများကို ယူဆခဲ့ကြသည်။
ရှီအာများ၏အေမာမ်(အ.စ)များထံမှ လာရှိထားသောအချို့သော အဆိုအမိန့်များမှာ အမျိုးသမီးတို့တွင် ပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းတို့သည် မျက်နှာနှင့် လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်သာဖြစ်ပေသည်။သို့သော် ဟေဂျားဘ်အား ဆန့်ကျင်သူများက ယင်းဟဒီးစ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆံပင်ပါဖုံးအုပ်ခြင်းကို ငြင်းဆိုထားကြသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသူတို့သည် ဆံပင်ကို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဟု မယူဆကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။၎င်းအပြင် အခြားဟဒီးစ်တော်များလည်း အေမာမ်(အ.စ)များထံမှ ဆင့်ပြန်ထားမှုများရှိနေပေသည်။၎င်းဟဒီးစ်တော်များတွင် ဆံပင်ပါဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ဖေါ်ပြထားလေသည်။
ကသာဒါဆိုသူမှ ပြောကြားလေသည်မှာ- တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှလည်း အချို့ဟဒီးစ်တော်များဆင့်ပြန်ထားသည်။တစ်ခုတွင်မိန့်ကြားတော်မူလေသည်မှာ -အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ကယာမသ်နေ့အပေါ်သက်ဝင်ယုံကြည်ထားသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖို့ မိမိ၏လက်ကို ခြုံလွှာအပြင်သို့ ထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ထို့နောက် လက်ဖျံသို့ ညွှန်ပြ၍ "ဤအထိသာ ဖေါ်ခွင့်ရှိသည်"ဟု ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ကြင်ယာတော် အွမ္မေစလ်မာသခင်မကြီး မှ ပြောကြားလေသည်မှာ "ကျွန်မသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံ၌ရှိနေစဉ် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)အခြားကြင်ယာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် မိုင်မူနာဟ် ဆိုသူမလည်းရှိနေခဲ့လေသည်။ထိုစဉ် ခဒီဂျာသခင်မကြီး(စ.အ)အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူ အိဘ်နေအွမ္မေမက်သူးမ်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ရှေ့မှောက်သို့ ခစားဝင်လာခဲ့လေသည်။ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မှ ကျွန်မတို့အား ကန့်လန့်ကာအနောက်သို့ သွားရောက်ကြရန် မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ထိုသို့ဖြင့်ကျွန်မတို့မှ စောဒကတက်၍ အိုအလ္လာဟ်၏ရစူလ် ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် မျက်မမြင်မဟုတ်ပါသလော ဟု လျှောက်ထားခဲ့ကြရာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)မှ သူသည်မျက်မမြင်ဖြစ်သော်လည်း အသင်မတို့သည် မျက်စိမြင်သူများမဟုတ်ပါသလော ဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။
အထက်ပါရေဝါယသ်တော်များ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် အမျိုးသမီးတို့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြုရာ၌ လျှော့ပေါ့၍ မိန့်ဆိုထားသော အဆိုအမိန့်များလည်းရှိနေပြန်သည်။ မွစ်လင်မ် ခလ်ဖီ ဆိုသူနှင့် အမီးရ်ဟိုစိုင်းန်သရ်ကာရှူးန်ဒ် ဆိုသူတို့သည် ထိုဟဒီးစ်တော်များကို အထောက်အထားပြု၍ လုံခြုံစွာဟေဂျားဘ် လုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းးနှင့် ဟေဂျားဘ်ပြုခြင်းသည် အမျိုးသမီးတို့အား တစ်ပါးသူများမှ အရသာခံကြည့်ခြင်းအား တားဆီးကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကို ငြင်းဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့ကြလေသည်။ထို့အပြင် မွစ်လင်မ်ခလ်ဖီသည် အလီအိဘ်နေစိုဝေ့ဒ် ဆင့်ပြန်ထားသော ဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ်ကို တင်ပြလေသည်မှာ - အလီအိဘ်နေစိုဝေ့ဒ်ဆိုသူသည် အေမာမ်ကာဇင်းမ်(အ.စ)အား "ကျွန်ုပ်သည် အလွန်ချောမောလှပသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ကြည့်မိသွားခဲ့သည် ။ ထိုသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ် ရင်ထဲ၌ စွဲလန်းသွားခဲ့လေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့အပြစ်ထိုက်ပါသနည်း"ဟု မေးလေရာ အေမာမ်(အ.စ)မှ အကယ်၍ အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သည်အသင်၏စိတ်အတွင်း၌ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ပါလျှင် ကိစ္စမရှိပေ" ဟုပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ မွစ်လင်မ်ခလ်ဖီသည် ယင်းရေဝါယသ်တော်၏စနဒ်(ရေဝါယသ်ကိုဆင့်ပြန်ထားသူများ)အား မှန်ကန်သူများဟု ယူဆထားလေသည်။
အခြားအုပ်စု တစ်စုမှလည်း -အေမာမ်(အ.စ)တို့၏ခေတ်ကာလများတွင် အမျိုးသမီးတို့အကြား ဟေဂျားဘ် ပြုလုပ်မှုများသည် တရားတော်အရမဟုတ်ပဲ လူ့မှုရေးရှု့ထောင့်အရသာဖြစ်သည်ဟူ၍ ယုံကြည်ထားကြသည်။၎င်းသူတို့သည် မိမိတို့အယူအဆကို မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေထူရန်အတွက် ဝဆာအီလ်လွရှ်ရှီအာကျမ်းတွင် ရေးသားထားသော အေမာမ်ဘာကိရ်(အ.စ)နှင့် အေမာမ်ဆွာဒိက်(အ.စ)တို့၏ အဆိုအမိန့်များ အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ထို့နောက် အကယ်၍ အမျိုးသမီးတို့သည် ခြုံလွှာများကိုရှာမတွေ့ခဲ့သောအနေအထားတို့တွင် ခြုံလွှာမပါပဲ သူစိမ်းအမျိုးသားများ၏ရှေ့မှောက်သို့ လာရောက်နိုင်သည် ခြုံလွှာမပါပဲ ဆွလားသ်ဝတ်ပြုနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုကြပြန်သေးသည်။
အခြားအုပ်စုတစ်စုမှလည်း ဟဒီးစ်တော်များကို ကိုးကားလျှက် ဆွလားသ်ဝတ်ပြုချိန်များတွင်သာ ဟေဂျားဘ်ကို အလုံအခြုံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုထားကြပြန်သေးသည်။ သူစိမ်းအမျိုးသားတို့ရှေ့မှောက်တွင် ခြုံအုပ်ခြင်းနှင့် ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာတွင်ခြုံအုပ်ခြင်းတို့အကြားအကြောင်းအရာနှစ်ခု သီးခြားစီဖြစ်နေသော်ငြားလည်း ထိုအကြောင်းအရာနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သက်သေထူသော အထောက်အထားများ၌ တူညီမှုရှိနေပေသည်။အချို့သော ဖိုကဟာ ဓမ္မသတ် ပညာရှင်များက ၎င်းအကြောင်းအရာနှစ်ခုအကြား တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအချိတ်အဆက်ရှိသည်ဟု ဆိုထားကြသလို တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာတွင် ခြုံလွှာဝတ်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုတင်းကျပ်သော ဓမ္မသတ်ထုတ်ပြန်မှုများပြုလုပ်ကြသည်။
အဟ်မဒ်-ဒေ-ပါကသ်ချီးဟ်သည် အစ္စလာမ့်စွယ်စုံကျမ်းကြီးတွင် အထက်ပါဟဒီးစ်တော်များကို အသုံးပြု၍ အဖြေတစ်ခုထုတ်ယူခဲ့သည်မှာ -
အမျိုးသမီးတို့အဖို့ မဖြစ်မနေခြုံရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့အသုံးပြုသော ခြုံလွှာသည် ခြုံထားပါလျှက် ဆံပင်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ ကို မြင်တွေ့နိုင်စေသည့် ပါးလွှာသော အဝတ်အထည်များမဖြစ်ရ။ ခြုံလွှာသည် ထူရမည်။ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာတွင်ဖြစ်စေ သူစိမ်းယောကျ်ားတို့၏ရှေ့တွင်ဖြစ်စေ ပါးလွှာသော ခြုံလွှာများအသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ထားကြောင်းရေဝါယသ်တော်များတွင် တွေ့မြင်ရပါသည်။
၎င်းမှ ဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာ ဂျုလ်ဘားဘ်သည် ကျေးကျွန်မများနှင့် ကျေးကျွန်မ မဟုတ်သော အမျိုးသမီးတို့အကြား ခွဲခြားရန်အတွက် သာ အာယသ်(မုက္ခပတ်)တော်ကျလာခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတို့အတွက် ခြုံလွှာခြုံခြင်းကို သတ်မှတ်မိန့်ဆိုရန်အတွက် မဟုတ်ပေ ဟု ယူဆပြောဆိုနေခြင်း မဟုတ်မမှန်ပါ ။ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားရမည်မှာ မလွဲမသွေပြုလုပ်ရမည့်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မျက်နှာဖုံးအုပ်ရန်အတွက်မလိုအပ်ပါ။
ရှီအာတို့အကြားရှိ ဟေဂျားဘ်အတိုင်းအတာ ပြင်ဆင်
ဟေဂျားဘ် ပြုလုပ်(ဝတ်ဆင်)ထားသော အမျိုးသမီးထုကြီး ညမြတ်ကဒရ်အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်တက်ရောက်နေပုံ
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ရှီအာ သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများ(မရ်ဂျာအ်-အေ-သက္ကလီးဒ်ကြီးများ)၏ ဓမ္မသတ်များအရ အမျိုးသားတို့နှင့်အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ အရှက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကိုယ်စီတာဝန်များရှိထားကြပေသည်။သို့သော် ဇနီးမောင်နှင့်နှစ်ဦးအကြားတွင် ထိုသို့ဖုံးအုပ်ရန်မလိုပေ။သို့သော်ငြားလည်း လွှဲရှောင်၍မရသောကိစ္စရပ်များတွင်(ဥပမာ အညစ်အကြေးစွန်ရာတွင် အကူအညီလိုအပ်နေသောကြောင့် အကူအညီတောင်းခံလာသည့်အခါ) ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဓမ္မသတ်များသီးခြားရှိထားပါသည်။ ၎င်းသည် ရှီအာပညာရှင်ကြီးများအကြား တူညီသော ဖတ်သဝါ(ဓမ္မသတ်)ပင်ဖြစ်လေသည်။သို့သော် အချို့သော အသေးစိတ် အကြောင်းအရာများတွင်သာ အမြင်ကွဲလွဲမှုများရှိပါသည်။
လက်ရှိရှီအာ့သာသာနာ့ပညာရှင်ကြီးများ၏ ဓမ္မသတ်များအရ အမျိုးသမီးတို့သည် ဆံပင်အပါအဝင် မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သူစိမ်းယောက်ျားများရှေ့တွင်ဖုံးကွယ်ထားရမည်။သို့သော် မျက်နှာနှင့် လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်(လက်ကောက်ဝတ်မှ လက်ချောင်းလေများအထိ)ကို ဖုံးအုပ်ရန်မလိုပါ။ခြေထောက်အား(ခြေမျက်စိမှ ခြေချောင်းလေးများအထိ )ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာတွင် ဖုံးအုပ်ရန်မလိုသော်လည်း သူစိမ်းယောက်ျားတို့၏ရှေ့တွင်မူ ဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အမျိုးသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဓမ္မသတ်သည် ပညာရှင်ကြီးများအကြား အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုများရှိနေပေသည်။ အချို့သော မရ်ဂျာ-အေ-သက္ကလီးဒ်(သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများ)သည် အခြားသော ပညာရှင်များနှင့်တူညီသော ဓမ္မသတ်များရှိထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း မိမိတို့၏ထပ်မံလေ့လောတွေ့ချက်များအရ ပိုမိုတင်းကျပ်သောဓမ္မသတ်များကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားမှုများရှိနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ဥပမာ-(ပညာရှင်များအကြားကွဲလွဲမှုမရှိသော ဓမ္မသတ်တစ်ခုမှာ) အမျိုးသားတို့သည် သူစိမ်းအမျိုးသမီးများရှေ့ဝယ် မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အား ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ (အချို့သော ပညာရှင်များ၏ ဓမ္မသတ်မှာ) အမျိုးသားတို့သည် သူစိမ်းအမျိုးသမီးများရှေ့ဝယ် မိမိတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အား ဖုံးအုပ်ထားရန်တာဝန်ရှိသလို လူတို့အကြားမဖေါ်အပ်သော နေရာများကိုလည်း ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ ထို ဓမ္မသတ်အရ အမျိုးသားတို့သည် သူစိမ်းအမျိုးသမီးများရှေ့တွင် အင်္ကျီလက်တို (သို့) အားကစားဘောင်းဘီအတိုများကို ဝတ်၍မရတော့ပေ။ ၎င်းအပြင် ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပညာရှင်တို့အကြား အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိနေသော်လည်း အားလုံးက တစ်သံတည်းထွက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသော ဓမ္မသတ်မှာ - ဇနီးမောင်နှင့်မှလွဲ၍ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့အကြား အရသာခံလိုသော ဆန္ဒဖြင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဟရာမ်ဖြစ်သည်။(အပြစ်ထိုက်သည်)မည်မျှပင် သွေးသားအရင်းအခြာဖြစ်ပါစေ။
ရှေးကျသည့် မြောက်များစွာသောဓမ္မသတ်ရင်းမြစ်ကျမ်းများတွင် ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာ၌ဖြစ်စေ၊သူစိမ်းယောက်ျားတို့၏ရှေ့တွင်ဖြစ်စေ ဖုံးအုပ်ထားရမည့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို (عورت) အရှက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ဟုသတ်မှတ်ပြောဆိုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အထက်ပါအနေအထားနှစ်မျိုးလုံးတွင် ထို عورت အားဖုံးအုပ်ရန် ဓမ္မသတ်ထုတ်ပြန်ထားကြလေသည်။အာယသွလ္လာဟ်မွရ်သဇာမွသွဟရီမှ ဆိုထားသည်မှာ- ဆွလားသ်ဝတ်ပြုချိန်၌ ဖြစ်စေ ၊ သူစိမ်းယောကျ်ားတို့၏ရှေ့တွင်ဖြစ်စေ ဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ဆိုထားမှုတွင် ကွဲလွဲမှုမရှိပေ။ သို့သော် အမြင်ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ပါလျှင်လည်း (ဆွလားသ်ဝတ်ပြုချိန်တွင် သူစိမ်းယောကျ်ားတို့၏ရှေ့တွင်ဖုံးအုပ်သည်ထက်ပို၍ ဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား)ဟူသော မေးခွန်း၏အဖြေအပေါ်၌ အမြင်ကွဲလွဲသွားနိုင်ချေရှိသည်။သို့ပေမဲ့လည်း ဆွလားသ်ဝတ်ပြုစဉ်တွင် ဖုံးအုပ်ရန်လိုသည့်အတိုင်း သူစိမ်းယောက်ျားတို့၏ရှေ့တွင်လည်း ဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ရှေးခ်ဂျဝါးဒ်မိုဂ်နီယာသည် ဆွလားသ်ဝတ်ပြုစဉ်နှင့် သူစိမ်းယောက်ျားတို့၏ရှေ့တွင်ဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားမှု၌ သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများအကြား အကွဲအလွဲတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းအပေါ် ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သော်လည်း အချို့သောပညာရှင်ကြီးများမှ ထိုအကြောင်းအရာနှစ်ခုအကြား ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားမှုမျာ:ပြုထားပေသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပညာရှင်အများစုက ဆွလားသ်ဝတ်ပြုချိန်တွင် ဖုံးအုပ်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထား၍ ဖုံးအုပ်ရမည့်အတိုင်းအတာကိုလည်း ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတအနေဖြင့်သိထားသင့်သည်မှာ ရှေးခေတ် (ဖိုကဟာ)ပညာရှင်များသည် ယင်းအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုခေတ်(ဖိုကဟာ)ပညာရှင်များနှင့် အလွန်မှပင် သုံးသပ်ချက်များ ကွဲလွဲခဲ့ကြလေသည်။
(၄)ရာစုခေတ်တွင် ရှိခဲ့သော ရှီအာပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည့် အိဘ်နေဂျိုနိုင်းဒ်အစ်ကာဖီဆိုသူသည် ကျေးကျွန်မဟုတ်သော မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့အဖို့ မိမိတို့၏အရှက်များဖြစ်ကြသော အရှေ့နှင့်အနောက်ကိုသာ ဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် ဟေဂျားဘ်အားဆန့်ကျင်သောသူများမှ လက်ခံယုံကြည်ထားကြသည်။သို့သော် ဟေဂျားဘ်အားလက်ခံကြသော အချို့က ထိုသို့ လက်ခံယုံကြည်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ကြလေသည်။သရ်ကာရှူန်းဒ် ကြွေးကြော်သည်မှာ (၈)ရာစုနှစ်မတိုင်မီအထိ ရှီအာပညာရှင်ကြီးများသည် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး(ဆွလားသ်၌ဖြစ်စေ(သို့)သာမန်အချိန်၌ဖြစ်စေ)လိုအပ်သောအနေအထားများမှအပ ဝါဂျီဘ်ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ် ဝါဂျီဘ်မဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရုတ်စွအဆုံး ဂျဝါဟီရ်ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုသူမှ ဆံပင်ကိုပါဖုံးအုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြောကြားသူတို့၏ အမည်နာမများကို ရေတွက်ခဲ့ရာတွင် ရှဟီးဒ်-ဒေ-အဝဲလ်နှင့် (၈)ရာစုနှစ်မတိုင်မီချိန်၌ရှိခဲ့သော ပညာရှင်တို့၏ အမည်နာမများကို ရေရွတ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မဒါရိက်ကျမ်းကို ရေးသားခဲ့သော အာမိုလီ(ရာစုနှစ် ၁၁ ခု အစောပိုင်း)သည် ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာတွင် ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားလေသည်မှာ-သိထားကြပါလေ၊ မိုဟက္ကိက်-ကေ-ဟိလ္လီ၏ပြောကြားမှုတွင်သာမက ရှီအာပညာရှင်အများစုတို့သည် ဦးခေါင်းရှိဆံပင်ကို ဖုံးအုပ်ပါလေဟု မပြောခဲ့သည့်အပြင် သက်သေအထောက်အထားများတွင်ပါရှိသော ဝါကျများကိုလေ့လာမည်ဆိုပါကလည်း ဆံပင်ကိုပါဖုံးအုပ်ရန် တာဝန်မရှိကြောင်းနှင့်ဝါဂျီဘ်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆံပင်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွင်းမှ မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်။
ဆံပင်ကိုပါ ဖုံးအုပ်ရမည်ဟု ပြောကြားမှုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရှီအာသာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများအကြားရှိ ပညာအထက်အမြတ်ဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့် မွလ္လာ မိုဟ်စင်န်ဖိုင်းဇ်ကာရှာနီ၊ မဒါရီက်ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုသူ အာမိုလီ၊ မိုကဒ္ဒစ်အရ်ဒဘီလီ စသဖြင့်သူတို့သည် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရှိထားသော သက်သေများဖြစ်သည့် အာယသ်မုက္ခပတ်တော်နှင့် ဟဒီးစ်တော်များကို စမ်းစစ်လေ့လာရာတွင် (ဆွလားသ်ဝတ်ပြုရာ၌ဖြစ်စေသို့တည်းမဟုတ် အခြားအချိန်၌ဖြစ်စေ) ဆံပင်ကိုပါ ဖုံးအုပ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဝါဂျိဘ်မဟုတ်ကြောင်းကို မိမိတို့၏ ဓမ္မသတ်အရေးအသားများတွင် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ကြလေသည်။ စူဇန်ချီဆိုသည့်ပညာရှင်ကြီးသည် အာယသွလ္လာဟ်နရာကီ မှလည်းဤသို့ယူဆခဲ့သည်ဟု ပြောကြားလာမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ပြောကြားသည်မှာ အာယသွလ္လာဟ်နရာကီသည် ၎င်းတို့ပြောကြားသည့်အတိုင်း မပြောကြားခဲ့ပါ။ ၎င်း၏ပြောကြားချက်အမှန်မှာ ရှေးပညာရှင်တို့၏ပြောကြားချက်များကို ဥပေက္ခာပြုပြီး ဖုံးအုပ်ရန်အတွက် ဝါဂျီဘ်အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်၍ မဖေါ်ထုတ်နိုင်ပေ။ဟူ၍သာဖြစ်သည် ။အမှန်တစ်ကယ်မှာ ၎င်းသည် ဟေဂျားဘ်အတိုင်းအတာကို ရှင်းပြခဲ့ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပေသည်။
ယခုခေတ်ပြိုင် ရှီအာသာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများအတွင်းမှ အဟ်မဒ်ကာဘိလ်ဆိုသူသည်သာ ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိအလင်းဆန့်ကျင်ငြင်းဆိုထားမှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ထို့အပြင် မိုဟ်စင်န်ကဒီဝရ်သည်လည်း ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်မခံသလို မေးခွန်းပေါင်းများစွာထုတ်၍ စောဒကတက်မှုများရှိထားသည်။သို့သော် ကျန်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲရှီအာတို့၏ သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများသည်ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ အပြည့်အဝလက်ခံကြသလို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်နှင့်မျက်နှာမှလွဲ၍ ဆံပင်အပါအဝင်ကျန်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဖုံးအုပ်ရမည် ဟုဓမ္မသတ်ထုပ်ပြန်ပေးထားသည်။သို့သော် ကျေးကျွန်မများအတွက် ထိုသို့ပြုရန်အမိန့်မရှိပါ။
အတိုက်အခံတို့၏ ရှု့ထောင့်မှ ဟေဂျားဘ်ပြင်ဆင်
ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့သော ဟေဂျားဘ်အတိုက်အခံများက အထူးသဖြင့် ဟေဂျားဘ်ဝါဂျီဘ်ဖြစ်မှုပေါ် သို့ဦးတည်ပြီး ကျေးကျွန်မတို့အတွက် ဟေဂျားဘ်ချုံရန်မလိုဟုဆိုလိုထားခြင်းကို အထောက်အထားပြုကာ ဟေဂျားဘ်သည်လူထုအကြားတရားတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သော ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျေးကျွန်မများတွင်လည်း တဏှာရာဂစိတ်များရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံ ကျေးကျွန်မတို့သည် အာရဗ်အမျိုးသမီးတို့ထက်ပင် ပိုမိုပြင်းထန်ကြလေသည် ဟုပြောကြသည်။
ဟေဂျားဘ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ကာမဂုဏ်ကိစ္စကို ဦးစားပေးသော အခြားအုပ်စုတစ်စုကလည်း ဟေဂျားဘ်သည် အမျိုးသမီးများကို အရာတစ်ခုဘက်သို့ပြောင်းလဲပေးနေသည် လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ အချို့ကလည်း “ဟေဂျားဘ်သည်အမျိုးသမီးတို့အတွက် တံတိုင်းဖြစ်သည်”ဟူသော ဝါကျအား ရှီအာတို့အကြားတွင်ရှိထားသော ယာယီထိမ်းမြားခြင်းဟူသည့် ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။အဆိုးဝါးဆုံးမှာ ဟေဂျားဘ်သည် အမျိုးသမီးတို့အား နှိပ်ကွပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။
ဟေဂျားဘ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သော အခြားအုပ်စုတစ်စုက ဟေဂျားဘ်သည် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့အတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပေ။ထို့ပြင် ၁၉၅၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားတွင်လည်း အမျိုးသမီးတို့သည် ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းများပေါ်တွင် ခြုံပဝါများရှိခဲ့ကြသည်။ထိုသို့ပဝါများစောင်း၍ မိမိတို့၏ ဦးခေါင်းနှင့်ဆံပင်များကို ဖုံးအုပ်ခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့် ဟေဂျားဘ်သည် ဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါ။(အမျိုးသားဖြစ်စေ၊အမျိုးသမီးဖြစ်စေ) ဘာသာတရားတိုင်း၌ လူတိုင်းသည် အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်မူတည်၍ မိမိတို့၏ အရှက်အင်္ဂါများကို ဖုံးအုပ်ထားလိုကြသည်။ထိုအကြောင်းအရာကို သိလိုလျှင် ယခုလက်ရှိအာဖရိကရှိ မျိုးနွယ်စုအသီးသီးတို့ကို သရုပ်ဖေါ်ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ဟေဂျားဘ် ဘာသာတရားနှင့်လုံးဝ မပတ်သက်ပဲ ယဉ်ကျေးမှုသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါသည် ဟုပြောဆိုကြလေသည်။ဟေဂျားဘ် လုပ်ကိုလုပ်ရမည်ဆိုသည့်အကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးတိုင်းဟေဂျားဘ်လုပ်ရန်ဝါဂျီဘ်ဖြစ်သည်ဟူသော အဆိုအပေါ် ၎င်းတို့မှ စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်မှာ “အကယ်၍အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထောက်ခံအားပေးလိုပါက ၎င်းသူမတို့အား ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နှင့် လွပ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်သည် ။ ၎င်းသူမတို့ကို ဟေဂျားဘ်ခြုံမှုမခြုံမှုတွင် လွပ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးသင့်သည်”ဟုဖြစ်သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ဆန့်ကျင်သူများသည် မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဓမ္မဟေဂျားဘ်ဆန့်ကျင်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ကြလေသည်။တမ်းပလိတ်:مدرک
လက်ခံကျင့်သုံးသူတို့၏ ရှု့ထောင့်မှ ဟေဂျားဘ်ပြင်ဆင်
အချို့သောမွစ်လင်(မ)တို့က ဟေဂျားဘ်သည် အမျိုးသမီးများကို အိမ်အတွင်း၌အကျဉ်းချခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါ။ထို့အပြင် ဟေဂျားဘ် သည် အမျိုးသမီးများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသို့ အေးချမ်းစွာဖြင့်လာရောက်နိုင်မှုကို ဖန်တီးပေးသည့်အရာ ဟုကြွေးကြော်ကြသည်။ထပ်မံပြောကြားကြသည်မှာ ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခြားအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကာမေသုမစ္ဆာစာရ အကြောင်းကိစ္စများကို ဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေး၍ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
အာယသွလ္လာဟ် မွရ်သဇာမွသွဟရီ၏ အမြင်ကို တင်ပြရလျှင်... အစ္စလာမ်တွင် ဟေဂျားဘ် (ခြုံလွှာခြုံခြင်း)ကိုအမျိုးသမီးတို့အတွက်သာ ဝါဂျိဘ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အလှအပကြိုက်မှုနှင့် အလှပြင်မှုတို့သည် အမျိုးသမီးတို့၏သဘာဝတရားသာဖြစ်ပြီး ထိုသဘာဝသည် အမျိုးသားများကို စွဲဆောင်စေသည်။အမျိုးသမီးတို့သည် အမျိုးသားတို့၏စိတ်နှလုံးသားကို ဖမ်းစားလေ့ရှိကြပြီး ထိုအခါ အမျိုးသမီးသည် မုဆိုး၊ အမျိုးသားသည်သားကောင်ဖြစ်သွားသည်။ ထိုသို့ဖမ်းစားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားသည် မုဆိုး၊ အမျိုးသမီးသည် တဖန်သားကောင်ပြန်လည်ဖြစ်သွားသည်။အလှအပမက်မောသော စိတ်သည် အမျိုးသမီးတို့ ၏မုဆိုးဖြစ်ခြင်းကို တွန်းအားပေးလေ့ရှိပေသည်။အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်လွင်နေစေသော အဝတ်အစားများဝတ်သည်(သို့)ကာမပိုင်းဆိုရာစွဲဆောင်နိုင်စေသော ပြင်ဆင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်သည်ဟု မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မျှ မကြားဖူးပေ။ အမျိုးသားများကို ဖမ်းစားလိုသည့် ၎င်းသူမတို့၏ သဘာဝတရားမှပါရှိလာသော စိတ်သည် အမျိုးသားများကို မိမိတို့ဘက်သို့ စွဲဆောင်ကာ မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းကြလေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးတို့အဖို့ မိမိတို့၏ခန္ဓာအားဖုံးအုပ်ထားရန်အမိန့်တော်ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အာယသွလ္လာဟ်ဂျဝါးဒ်အာမိုလီ ၏အမြင်... ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆိုလိုချင်သော အဓိပ္ပါယ်မှာ -ဟေဂျားဘ်ဟူသည့်အကြောင်းအရာမှာ အမျိုးသမီးတို့၏ တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးတို့အား အများသူငှာမှ တဏှာစိတ်ဖြင့် ကြည့်ခြင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ထို့အတွက် မွစ်လင်(မ)မဟုတ်သော အခြားအမျိုးသမီးတို့အား တဏှာစိတ်ဖြင့် ကြည့်မဟုတ်ပါက အကြောင်းမဟုတ်ပေဟု ဓမ္မသတ်ရှိထားပေသည်။ အမျိုးသမီး၏တန်ဘိုးအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင် ၎င်းသူမတို့၏ တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။တစ်နည်းဆိုရသော် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဟေဂျားဘ် မပြုလုပ်မှုအပေါ် လင်ယောက်ျားနှင့် သားသမီးများအပြင် ညီအစ်ကိုမောင်နှများအားလုံးက သဘောတူ ကြပါစေ ။ သို့သော် မည်သည့်အခါမျှ ကုရ်အာန်သည် ထိုလုပ်ရပ်အား သဘောတူလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ အမျိုးသမီး၏ တန်ဖိုးသည် حق الله (ဟက္ကုလ္လာဟ်)ဖြစ်သည်။၎င်း၏တန်ဖိုးကို အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်သာလျှင် သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိ၍ သတ်မှတ်လည်း သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်။.
အိစ်နား၏ တင်ပြမှု... အာယသွလ္လာအဟ်မဒ် ဂျန္နသီသည် တီဟီရန်မြို့တွင် သောကြာအပတ်စဉ် စုပေါင်းဝတ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား(သောကြာနမားဇ်)၌ ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကြေငြာခဲ့သေည်မှာ .. "ဟေဂျားဘ်သည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများကို အထူးကာကွယ်ပေးသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ဘာသာတရားမှ သွန်သင်သော အကြောင်းအရာသာလျှင်မဟုတ်ပေ။၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလွန်အရေးပါသော လုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟေဂျားဘ်သည် တရားလမ်းစဉ်မဲ့ကလေးမွေးမှု(ဟရာမ်ဇာဒါမွေးလာမှု)မှကာကွယ်ပေးသည်။ 
အစ္စလာမစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည့် အာယသွလ္လာဟ် မွရ်သဇာ မွသွဟရီမှ ပြောကြားထားသည်မှာ - မိသားစုတစ်စု ခိုင်မာမှုသည် ဟေဂျားဘ် အပေါ်၌လည်းမူတည်နေကြောင်း အသိတရားက သက်သေထူနေပေသည်။သင့်လျှော်သောဝတ်စားဆင်ယင်မရှိမှုနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်လွင်သော အဝတ်အစားများကို ဝတ်စားဆင်ယင်မှု့တို့သည် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတို့အကြား လိင်ဆက်ဆံမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူသွားစေ၍ ထိုမှတဆင့် ဖခင်မဲ့ကလေးများပေါ်လာခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေမဲ့မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ထိုသို့ဖြင့် ဇနီးမောင်နှံတို့အကြားတွင်လည်း ဆက်ဆံမှုများ တဖြေးဖြေးကျဲလာပေသည် ဟု ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ပြောကြားသည်မှာ-ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းကာ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းတည်ထောင်မှုရစေသောစနစ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကို ထိန်းချုပ်ထားသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနှင့်လွပ်လပ်စွာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မဲ့သော အသိုင်းအဝိုင်းတို့အကြား ထိမ်းမြားခြင်း ဟူသောဝေါဟာရနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် အလွန်ကွာဟမှုရှိသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ပထမလူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြားတွင် ထိမ်းမြားခြင်းဟူသည်မှာ တားဆီးချုပ်ချယ်မှုများပြီးဆုံးသွားခြင်းနှင့် ဒုတိယအသိုင်းအဝိုင်းအကြားတွင် ချုပ်ချယ်မှုနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ စတင်ခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်များရရှိလာပေသည်။လွပ်လပ်စွာဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်သော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ထိမ်းမြားခြင်းသည် လွပ်လပ်မှုများကုန်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အကြား ထိမ်းမြားသည့်အခါ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအား တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးသစ္စာရှိကြရန် မှာကြားဆုံးမလေ့ရှိကြသည်။သို့သော် အစ္စလာမ်တွင် ထိမ်းမြားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် တားဆီးခံရခြင်းများ၊ချုပ်ချယ်ခံရခြင်းများနှင့် အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ခြင်းခံရမှုများ ကွယ်ပျောက်သွားလေသည်။
ဟေဂျားဘ်သည် အလွန်မှပင်အရေးကြီးကြောင်းကို အစ္စလာမ့်ပညာရှင်ကြီးများမှ အသိတရားဖြင့်သက်သေထူထားသည်။ ထိုအကြောင်းအရာမှာ လူတွင်လွပ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမျိုးသမီးတို့၏သဘာဝတရားများအတွင်းမှ တစ်ခုသည် မိမိကိုယ်ကိုအလှအပဖန်တီးခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသူမတို့သည် မိမိတို့ထံ၌ လုံခြုံသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အလှဆင်နိုင်မှုအားနည်းလာသည့်အခါ မိမိကိုယ်ကို လှပရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံပြုလုပ်ရမည်ကို အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်မှလည်း ခန္ဓာကိုယ်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံမှုဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်နေလေသည်။ထိုသို့ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုဘက်သို့ စိတ်အားထက်သန်သွားပြီး လူတွင်လွပ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟူသော အရာသည်လည်း ရာဂနှင့် တဏှာအတွင်း၌သာ ရစ်ဝဲနေတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါယင်းသူမသည် ပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် လူသားတို့တိုးတက်ပြောင်းလဲစေသော ကိစ္စရပ်များကို မိမိတို့ဦးနှောက်အတွင်း၌ထည့်၍ အလျဉ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ချိန်ရတော့မည်မဟုတ်သလို ထိုအကြောင်းအရာများသည်လည်း ၎င်းသူမထံတွင်ပျောက်ဆုံးပေလိမ့်မည်။ .
အစ္စလာမ်သာသနာသည် ဟေဂျားဘ်အား အမျိုးသမီးတို့အတွက် အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားရင်း အမျိုးသမီးသည် ရာဂစိတ်ကို ဖြေပျောက်စေရန် အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်၍ ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းကို မီးမှောင်းထိုးပြထားလေသည်။အာယသွလ္လာဟ် မွသွဟရီသည် ذالک ادنی ان یعرفن فلایؤذین ဆိုသည့်မုက္ခပတ်တော်ကို ဍီကာဖွင့်ဆိုရာတွင် ပြောကြားထားလေသည်မှာ - ယင်းမုက္ခပတ်တော်၏ဆိုလိုရင်းမှာ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှု(ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်မှု)သည် သိက္ခာရှိသူဟု ဖေါ်ပြခြင်းနှင့် မိမိတို့သည် ယောကျ်ားသားတိုင်းထံ မိမိကိုယ်ကို ပုံအပ်ထားမှုမရှိကြောင်းကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသို့သောအနေအထားတွင် ယင်းအမျိုးသမီးတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားမှုက ၎င်းသူမများကို နှောက်ယှက်မှုများမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားပေသည်။ .
အထက်ပါမုက္ခပတ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အာယသွလ္လာဟ် အဘ်ဒုလ္လာဟ်ဂျဝါးဒ်အာမိုလီမှလည်းပြောကြားထားသည်မှာ -ဟေဂျားဘ်ဟူသည်မှာ အမျိုးသမီးတို့အပေါ်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် သူစိမ်းယောကျ်ားတို့၏ တဏှာအကြည့်များမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ဖြစ်လေသည်။
ဟေဂျားဘ်သည် အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအပေါ် သက်သေထူထားသော အချက်တစ်ချက်မှာ - တန်ဖိုးရှိသောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းဟူက လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားခြင်းဟူသော အကြောင်းအရာသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။အစ္စလာမ်သာသနာအတွင်းရှိ တရားဟောဆရာတို့သည် ဟေဂျားဘ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အထက်ပါအထောက်အထားကို သက်သေပြုကာ ဟောပြောတင်ပြလေ့ရှိကြသည်။ထိုအကြောင်းအရာသည် ဆယိဒ်အဘုလ်ဟစန်မဲဟ်ဒီရေးသားသော ဟေဂျာဘ် စာအုပ်တွင် တင်ပြထားသည်မှာ-မည်သည့်တန်ဖိုးရှိသည့်လူ(သို့)အရာကိုမဆို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရမည်ဟု အသိညဏ်မှ သွန်သင်ပေးထားလေသည်။ဥပမာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲအား အဘယ့်ကြောင့် လုံခြုံရေးများက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားပါသနည်း။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က ထိုသို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုသည် ၎င်းသူ၏ လွပ်လပ်မှုကို ပိတ်ပင်ပါသလား။ ဖြေရမည်ဆိုပါ ထိုသို့ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် ၎င်းသူအားပိုမိုလွပ်လပ်စေသလို လုံခြုံမှုရှိနေသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်သည့် မိမိတာဝန်ကို အေးချမ်းစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
သာသနာ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တို့မှ ဟေဂျားဘ်သည် အီရန်နိုင်ငံ၏အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် အီရန်တွင် အစ္စလာမ်မတိုင်မီကာလများ၌ပင် လူတို့အကြားဟေဂျားဘ်ရှိခဲ့သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ဤသို့ကြီးမားလှသော အမွေအနှစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရန် တိုက်တွန်း၍ပြောဆိုခဲ့ကြလေသည်။ အမေရိကန် သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူဝိုင်းလ်ဒေါရန့်ဆိုသူပြောကြားသည်မှာ-အီရန်ရှေးကျသောသူတို့အကြား အမျိုးသမီးတို့သည်အလွန်မှပင်လုံခြုံစွာဝတ်စားဆင်ယင်မှုများရှိခဲ့ပြီး မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ မျက်နှာကိုမျှ မမြင်ခဲ့ရပေ။ (ထိုအကြောင်းအရာသည်)၎င်းသူထံမှ ကျန်ရစ်ခဲ့သောအမွေအနှစ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုအတိုင်းပင် အီရန်အမျိုးသမီးများသမိုင်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူဘေနဖ်ရှဲဟ်ဟေဂျာဇီဆိုသူကဆိုထားလေသည်မှာ- အရှ်ကာနီမင်းဆက်လက်ထက်တွင် အီရန်အမျိုးသမီးတို့သည် မြေပြင်၌ တရွတ်တိုက်နေသောအင်္ကျီလက်အရှည်ပွပွများကို ဝတ်လေ့ရှိကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံ၌လည်း ကော်လန်မပါသောအင်္ကျီအရှည်လက်တို များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ထို့နောက် အခြားအင်္ကျီအရှည်တစ်ခုကိုလည်း အပေါ်မှထပ်၍ ဝတ်ကြသည်။ ထိုသို့ဝတ်ဆင်သည့်အခါ ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဖုံးအုပ်နိုင်သည့် ခြုံလွှာကြီးကြီးကိုလည်း ထပ်မံခြုံကြသည်။ ထိုအတိုင်း ဆာဆာနီမင်းဆက်ခေတ်များတွင်လည်း အီရန်အမျိုးသမီးတို့သည် တစ်ကိုယ်လုံးလုံခြုံနိုင်သည့် ခြုံထည်ကြီးများကို ခြုံလေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ထိုခြုံထည်ကြီးများမှာ ဦးခေါင်းမှ ဒူးအောက်အထိ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဆယိဒ်အဘုလ်ဟစန်မဲဟ်ဒီ၏ခံယူချက်တွင် လုံခြုံစွာဝတ်စားမှုသည် အရှက်သိက္ခာမဲ့ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးသည်။ဟုဖြစ်သည်။၎င်းသူမှဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ- ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်အရှက်သိက္ခာသည် အပင်တစ်ပင်၏ အရွက်နှင့်အကိုင်းတို့ သည်၎င်း၏အမြစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်နှင့်အလားသဏ္ဌာန်တူပေသည်။အမြစ်သည် အရွက်နှင့်အကိုင်းတို့သန်စွမ်းလာစေရန်အကြောင်းခံ တစ်ခုဖြစ်သလို အရွက်နှင့်အကိုင်းတို့သည်လည်း အမြစ်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းပင် လူတစ်ဦး၏ အရှက်သိက္ခာသည် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပေါ်အခြေခံသလို ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်လည်း အရှက်သိက္ခာကို ခိုင်မြဲစေသည်။
၎င်းသူမှ ဆက်လက်ပြောဆိုသည်မှာ - လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြာတွင်း လွယ်လင့်တကူလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ခြင်းနှင့် ဟေဂျားဘ်မဲ့ခြင်းတို့သည် အသိုင်းအဝိုင်းကြီးကို တဏှာရာဂလိုက်စားမှုဘက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးလေသည်။ထိုအခါ များစွာသောအမျိုးသားတို့သည် အိမ်အပြင်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် တဏှာသို့စွဲခေါ်ရာသို့ ပါမျောသွားပြီးနောက် စာရိတ္တပါပျက်စီးကာ ရှိထားသော သိက္ခာများပင် ကျန်ရစ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ထိုသို့သောအခါတွင် အခြားသူစိမ်းအမျိုးသားများမှ မိမိ၏ဇနီးအား စိတ်(သို့)ကိုယ်လက်တို့ဖြင့် ပစ်မှားခဲ့ကြမည်ဆိုပါကလည်း ယင်းကဲ့သို့သောသူတို့သည် စိတ်မဆိုးကြသည့်အပြင် မိမိဇနီးအား အများကကြည့်သည့်အတွက် (မိမိဇနီးအဘယ်မျှချောမောလှပသည့်အတွက်)ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားကြသေးသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပြည့်စုံစွာဝတ်စားမှုသည် ဂုဏ်အင်္ဂါကို ပိုမိုမြင့်မားစေသလို မိသားစုကို စောင့်ရှောက်လိုစိတ်ကိုလည်းအားဖြစ်စေသည်။ ဟေဂျားဘ်မဲ့မှုနှင့် စည်းမရှိမှုတို့သည် ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေသလို မိမိ၏ မိသားစုအားစောင့်ရှောက်ကာကွယ်လိုစိတ်ကိုလည်း အလွန်ပင် အားနည်းစေသည်။ 
အာယသွလ္လာဟ်မိုဟ်စင်န်ကရာအသ်သီသည် စူရာ-ယေ-ဟိုဂျရားသ်ကိုဍီကာဖွင့်ဆိုရင်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-အမျိုးသမီးအချို့သည် လူ့အခွင့်အရေးတွင်လွပ်လပ်မှုရှိရမည် ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အများသူငှာတို့ရှေ့သို့ ဟေဂျားဘ်မပါပဲ သွားရောက်လေ့ရှိကြသည်။အကယ်၍ ယင်းသူတို့သည် မိမိတို့၏လုပ်ရပ်များအပေါ် မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာ စဉ်းစားကြခဲ့မည်ဆိုပါက လူ၌ရှိသောအသိတရားသည် ၎င်းသူမတို့အား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း ထို့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို လုံခြုံစွာ ဖုံးအုပ်ခြင်းဘက်သို့ လမ်းညွှန်နေပေလိမ့်မည်၊ ၎င်းသူမတို့သည် မည်မျှပင် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးများမဟုတ်ပါစေ။
ဟေဂျားဘ်မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာ (၁၇)မျိုးကို ဆက်လက်၍ တင်ပြသည်မှာ -၁။ အထင်သေးခံရခြင်း
၃။ မိသားစုစနစ်ကို ပျက်ပြားစေခြင်း
၄။ စွဲဆောင်မှုပြုခံရခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်း
၇။ မဝတ်မစားနိုင်သူတို့၏ရှေ့မှောက်တွင် ဝတ်စားမှုများကြောင့် ၎င်းတို့၏စိတ်အားကိုငယ်စေခြင်း
၈။စီးပွားရေးကျဆင်းလာခြင်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူ့အာရုံသည် အလုပ်၌မရှိတော့ပဲ မရောက်သင့်သောနေရာသို့ရောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၉။ ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါအပေါ်အလေးမထားသောသူတို့မှ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများကို မျှော်မှန်းချက်ကင်းမဲ့သွားစေရန်ပြုလုပ်စော်ကားခြင်း
၁၁။ တဏှာနောက်လိုက်စားသူတို့ကို ဖြည့်ဆီးပေးခြင်း
၁၂။ မပြိုင်သင့်သောနေရာများတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများရှိလာခြင်း
၁၃။ ဖခင်မသိသော ကလေးများ ပွားများလာခြင်း
၁၇။ ကလေးဖြတ်ချခြင်း၊မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းနှင့် လူသတ်ခြင်းစသဖြင့်တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
အချို့သော အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများ၏အချို့သော နေရာဒေသများတွင် ဟေဂျားဘ် မပြုမနေရ သတ်မှတ်ထားလေသည်။ ယင်းနိုင်ငံများကို အောက်ပါအတိုင်းရေတွက်နိုင်ပါသည်။
ယင်းနိုင်ငံတွင် မွစ်လင်(မ)အမျိုးသမီးတို့အတွက်သာ မပြုမနေရဖြစ်သည်။ ဘာသာခြားများအဖို့ ပြုလုပ်ဖို့ရန်မလိုပါ။
ယင်းနိုင်ငံ၏ အာန်ကြီ အမည်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားသည်။
ယင်းနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးအစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံးတို့သည် ရုံးဌာနများတွင် ဟေဂျားဘ်မပြုမနေရဖြစ်သည်။
.အီရန်နိုင်ငံတော်လှန်ရေးပြီးနောက်ပိုင်း အစ္စလာမ့်နိုင်ငံထူထောင်၍ကြေငြာပြီးသည့်အခါတွင် ဟေဂျားဘ်အား မပြုမနေရဟုသတ်မှတ်လိုက်သည့်အခါ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်သူများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။၎င်းသူတို့အတွင်းမှ အထင်ရှားဆုံးတစ်ဦးသည် မာဟ်မူးဒ်သွာလေကာနီဖြစ်သည်။ထိုသို့ကြေငြာခဲ့သည့်အတွက် အေမာခိုမေနီ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ဟေဂျားဘ်သည် ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သိုသောလူ(သို့) ပညာရှင်တစ်ဦးမှ ဖန်တီးထားသော အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ထိုကိစ္စသည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှ ပြဋ္ဌာန်းသော အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ထိုအမိန့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ငြင်းဆို၍ မရနိုင်သလို ထိုကျမ်းအပေါ်သက်ဝင်ယုံကြည်သော အမျိုးသမီးများမှလည်း ငြင်းဆန်၍ မရနိုင်ပါ။အစ္စလာမ်၊ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်သာသနာတို့သည် အမျိုးသမီးတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လိုကြသည်။ထိုသည်မှာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ဤစီတန်းဆန္ဒပြပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများကို လာရောက်ဖို့ရန်မည်သူက တိုက်တွန်းခဲ့ပါသနည်း။ (မည်သူကမျှတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းမရှိပါ၊အားလုံးသောသူတို့သည် မိမိတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်စီနှင့် ထိုစီတန်းဆန္ဒပြပွဲများသို့ (ရှားဘုရင်ကို တော်လှန်ရန်)လာရောက်ခဲ့ကြသည်။) မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သာ ဤဟေဂျားဘ်ကို အီရန်အမျိုးသားနှင့် အစ္စလာမ့်ကြွေးကြော်မှု ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ဟဇ်ရသ်အာယသွလ္လာဟ် ရူဟွလ္လာဟ် ခိုမေနီ သည် ဖခင်တစ်ဦးမိမိ၏သားသမီးများကို ဆုံးမသကဲ့သို့ ဆုံးမစကားပြောကြာရင်းလမ်းညွှန်ခဲ့သည်မှာ -အသင်တို့သည် ဟေဂျားဘ်အား အလေးထားမည်ဆိုပါက အစ္စလာမ်နှင့် အီရန်ကို ပိုမိုအားဖြစ်ထွန်းစေမည်။ အစ္စလာမ်၊ကုရ်အာန်နှင့် သာသနာ့ပညာရှင်ကြီးများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးလိုကြသည်။ထိုသည်ကား အကြောင်းအရာအစစ်အမှန်ပင်ဖြစ်လေသည်။ အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ခြင်းထို၌ အလျဉ်းမရှိထားပေ...
ထိုကာလတွင် ဟေဂျားဘ်အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူတို့အကြား ဟေဂျားဘ် အားလက်ခံကျင့်သုံးပြီး မလုပ်မနေရဟု ယူဆထားသူများကလည်း ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများဖြင့် "ဟေဂျားဘ်သည် မပြုမနေရ (ဝါဂျီဘ်)ဖြစ်ကြောင်း"ကြေငြာခဲ့ကြသည်။အီရန်သက္ကရာဇ် ၁၃၅၉ ခုနှစ်တွင် အေမာမ်ခိုမေနီ၏ အမိန့်ဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဟေဂျားဘ် မပါပဲ အစိုးရရုံးဌာနများသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအား တားဆီးခဲ့လေသည်။၁၃၆၂ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ့်အကြံပေးလွှတ်တော်မှ ဟေဂျားဘ် မပါရှိပဲ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် သွားလာမှုပြုပါက အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသူမသည် ကြိမ်ဒဏ် (၇၂) ရိုက်ခြင်းခံရမည်။အကယ်၍ ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်မှုတွင် လုံခြုံမှုမရှိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်သတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်ဟု ဥပဒေထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သည်။.
ဟေဂျားဘ်အား တားမြစ်သော နိုင်ငံများပြင်ဆင်
၎င်းနိုင်ငံတွင် အစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင် ဟေဂျားဘ်နှင့်ကျောင်းတက်ခြင်းအား တားမြစ်မှုရှိခဲ့သလို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တူရကီပါလီမန်မှ ထိုဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံဘုရင် ရေဇာရှားသည် အီရန်သက္ကရာဇ်၁၃၁၄၊ ဒေးယ်လ(၁၀ လပိုင်း)၊၁၇ ရက်နေ့တွင် ဟေဂျားဘ် မပြုရဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုဥပဒေကို များမကြာမီကာလတွင် ပျက်ပယ်သွားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်အစိုးရသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအပြင် အစိုးရပိုင်ဌာနများတွင် ဟေဂျားဘ်ပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့လေသည်။
ပြင်သစ်တွင် ဟေဂျားဘ်အား ဘာသာရေးအမှတ်အသားဟု ယူစကာ တားမြစ်ခဲ့သည့် စာတမ်း
သာဂျီကစ္စတန်၊အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့် ကိရ်ကစ္စန်နိုင်ငံတို့တွင် ကျောင်းများ၌ အမျိုးသမီးများဟေဂျားပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ထိုတားမြစ်မှုသည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးသော ရုရှားအစိုးရလက်ထက်တွင်ဖြစ်သည်။
↑ Definition of hijab in Oxford Dictionaries (British & World English)။ Oxforddictionaries.com။ 2013-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hijab – Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary။ Merriam-webster.com (2012-08-31)။ 2013-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hijab noun – definition in British English Dictionary & Thesaurus – Cambridge Dictionary Online။ Dictionary.cambridge.org (2013-04-16)။ 2013-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Definition of hijab။ Collins English Dictionary။ 2013-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lemmon, Gayle Tzemach (16 July 2010). "Will Afghan women's rights be bargained away?". CNN. Retrieved 19 July 2010.
↑ A Video tells all about Hijab in Bangladesh iReport. CNN.
↑ http://alwafd.org/ميـديا/1292083-فيديو-نوال-السعداوي-الحجاب-عادة-سيئة-وتدين-زائف%7Cتاریخ=۰۷ اوت ۲۰۱۶
↑ مقاله حجاب شرعی از مترجم و مفسر قرآن محمد باقر بهبودی
↑ حجاب شرعی در عصر پیامبر، امیر ترکاشوند، ۷۸۵
↑ ČĀDOR, In Islamic Persia, Encyclopedia Iranica, Hamed Algar
↑ تفسیر المیزان- حجاب در قرآن
↑ وسائل الشیعه، حر عاملی، کتاب النکاح
↑ صحیح ترمذی ج 41393 ط مدینه مسند ابن حنبل ج 11291 سنن ابن داود کتاب لباس 04. کافی ج 50415 وسائل الشیعه ج 341372
↑ 8تفسیر طبرسی الدرالمنثور ذیل آیه.
↑ «These customs presuppose that women are the source of sexual arousal and temptation for men". Women's rights law reporter, Volumes 26–27. Author: Rutgers Law School (Newark, N.J.). Publisher: Women's Rights Law Reporter, 2005
↑ တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
↑ مسئله حجاب، صفحه 87 ، انتشارات صدرا
↑ سید ابوالحسن مهدوی، مبحث حجاب، انتشارات اعتلای وطن
↑ سید ابوالحسن مهدوی، مبحث حجاب، اعتلای وطن، ص 49
↑ تفسیر نور، سوره حجرات، آیه 1 ، انتشارات درس‌هایی از قرآن
↑ Jewel Topsfield။ "Ban on outdoor music concerts in West Aceh due to Sharia law"၊ The Sydney Morning Herald၊ April 7, 2016။
↑ رادیو زمانه | «در مورد حجاب، اجبار در کار نیست»
↑ جریمه‌های یک میلیون تومانی برای 'بدحجابی' در مشهد
کدیور، محسن. «تأملی در مسئله حجاب». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
خلفی، مسلم. «بازنگرشی درون‌دینی به حجاب». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
عابدینی، احمد. «سیری در آیات حجاب». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
مرتضوی، سید ضیاء. «دوری از نگاه زنان بیگانه». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
فیاض، نبیل. «الحجاب فی الإسلام: دین أم طبقیة؟». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
قابل، احمد. «در مورد پوشش (حجاب)». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
خسروپناه، عبدالحسین. «حجاب‌شناسی زنان». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
دباغ، سروش. «حجاب در ترازوی اخلاق». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
پژوهشکده تحقیقات اسلامی. «احکام آراستگی ظاهری». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
سوزنچی، حسین. «نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
ایازی. «بررسی الزام حجاب». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
البناء، جمال. [www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/03/10/39340.html «الحجاب غیرشرعی والزواج صحیح دون شهود وولی وإمامة المرأة جائزة»]. တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
القمنی، سید. [www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=۹۲۹۲۸ «مکانة الحجاب بین فضائل العرب»]. တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
جمشیدی، اسدالله. «فلسفه حجاب». တမ်းပလိတ်:یادکرد وب
مطهری، مرتضی. مسئله حجاب. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
ترکاشوند، امیرحسین. حجاب شرعی در عصر پیامبر. تهران، ۱۳۸۹. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
غروی، سید علی اصغر. جزوه حجاب در قرآن. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
ضیاپور، جلیل. پوشاک زنان ایرانی. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
احمد، لیلا. زنان و جنسیت در اسلام: ریشه‌های تاریخی مباحث مدرن. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
العشماوی، محمد سعید. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
مغنیه، جواد. တမ်းပလိတ်:یادکرد کتاب
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟေဂျားဘ်&oldid=496936" မှ ရယူရန်
၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။